အတနျးဖျောသူငယျခငျြး – My Blog
နီလာတဈယောကျအလုပျကိစ်စနှငျ့ ရနျကုနျကိုရောကျလာသညျ။မနညေ့နကေကားစီးမနကျရနျကုနျရောကျတော့တဈဦးတညျး ယောငျခြာခြာဖွဈ နတေော့ငယျသူငယျခငျြးဖွဈတဲ့ ဂြော့ကိုသတိရလိုကျသညျ။ဂြော့ဆိုတာကငယျငယျကတညျးကအတူ စားအတူ ကစားနခေဲ့တဲ့အကောငျ တရပျကှကျလုံးမှာမိနျးကလေးတှေ ခညျြးမှေးထားကွတဲ့ကွားကသူ တဈယောကျတညျးပဲယောကျြား လေးပါတော့သူငယျခငျြးအားလုံးရဲ့ကစားဖျောယောကျြားလေး။မိသားစုထဲမှာသားအကွီးမွေးအကွီးဝိုငျး ခဈြကွတဲ့အကောငျ၊ ရပျကှကျကလဲ ခဈြကွတယျ။တမြိုးလုံးသညျးသညျးလှုပျတော့မုနျးဖို့ကောငျးပမေယျ့ လူကလူဆိုးတော့မဖွဈဘူး။ခငျစရာ အရမျး ကောငျးတယျ။ဒီကောငျကို ချေါပွီးနှိပျစကျမယျတှေးကာဖုနျး ဆကျလိုကျတယျ။
မနကျအလုပျသှားခါနီးဖုနျးဝငျလာ တော့ကနြျောမသိတဲ့နံပါတျတဈခုပါ ပဲ။ဒါပမေယျ့ကနြျောကိုငျပွီးထူး လိုကျတယျ။ “ဟလို” “ဟဲ့ ငဂြာ့ငါပါ၊နီလာလေ” “အေး မချေါစဖူးအချေါထူးလို့ဘာ မြားလဲလငျရလို့ဖိတျစာပေးပို့မလို့ လား” “လဖှတျ ဒါပဲခုလုတျ တိုကျနတောပဲ၊ လငျမယူတော့ဘူး၊မိနျးမပဲယူတော့ မယျ” “မိုကျတယျနငျ့ကိုယူရငျနောကျတဈ ယောကျပါထပျရမယျ” “မသာ ဒါပဲစဉျးစားနတောပဲ” “ဟားးး၊ကဲပွော” “ငါရနျကုနျရောကျနတေယျဟ” “ဟုတျလား၊ဘယျမှာတညျးလဲ” “ဟိုတယျမှာပေါ့ဟယျ” “ရနျကုနျရောကျတာမြားငါ့အိမျမ လာဘူး” “မလာရဲပါဘူး၊နငျ့အမကေိုကွောကျ လို့” “ကွောကျစရာမလိုပါဘူးဟာ၊ငါတို့ အသကျလညျးသုံးဆယျပဲကြျောနေ ပွီ” “မသိဘူးဟာ၊ငယျငယျကတညျးက ကွောကျရတာဆိုတော့၊သိတယျမ လားသူ့သားတှေ ကိုရှာသူနှငျ့ညားမှာ စိုးလို့” “အဲဒါငယျငယျတုနျးကပါဟာ၊အခု တော့သူ့မှာကူဖျောလောငျဖကျမရှိ လို့စိတျညဈနရေတာ” “ဟုတျလား..နောကျမှအနျတီကိုလာတှမေ့ယျဟာ”
“အေးပါ၊နငျဘာကိစ်စနဲ့ရနျကုနျလာ တာလဲ” “အလုပျအပွောငျးအရှကေိ့စ်စပါဟာ၊အခုငါမသှားတတျလို့၊လမျးညှနျ ပေးဦး” “ငါလာချေါ မယျဟ”“နငျ့လိုအလုပျမြားတဲ့လူမချေါရဲပါ ဘူး” “နငျကလဲစကားနာထိုးဖို့ပဲသိတယျ” “မဟုတျလားနငျကဘောစိပဲကို” “မသာမ လိ့ဘောစိ၊ငါလာခဲ့မယျ” “အားမှလာ” “အေးအခုလာမယျ” တကယျတမျးကနီလာနှငျ့ကနြျောကငယျသူငယျခငျြး၊ရှဈတနျး အထိအတူ ကြောငျးတကျဖကျ၊ဒါပမေယျ့နီလာကကနြေျာ့ထကျအသကျတနှဈကြျော ကွီးတယျ။စာမေးပှဲတနှဈကလြို့အတနျးတူခဲ့ တာ။ရှဈတနျးအထိအတူတူဆော့ခဲ့ကွတာ။ငယျတုနျးကဆို ရငျလငျမယားလုပျတမျးတောငျက စားခဲ့သေး။သူတို့ကအကွီးတှေ ဆို တော့သူတို့ကဆရာမကွီးပေါ့ဗြာ။ရှဈတနျးရောကျလာတော့ကနြော့အမကေနီလာတို့ အပြိုဖွဈလာပွီသားသူတို့နှငျ့ မဆော့ရတော့ ဘူးဆိုလို့သာကနြျော ကနြျောကခပျတနျးတနျးဖွဈသှားခဲ့တာဗြ။ဒီလိုခပျတနျးတနျးနတေော့ နီလာကမေးတယျ “ဟကေ့ောငျ နငျငါ တို့နဲ့လာမကစား ပါလား” “အမကေနငျ့ကိုအပြိုဖွဈနပွေီလို့ ပွောတယျ၊ငါကွောကျလို့ဟ” “ဘာကွောကျစရာရှိလို့လဲ” “ငါလဲမ သိဘူး၊အပြိုဖွဈတယျဆို တာဘာလဲမသိဘူး” “နို့ကွီးလာတာကိုပွောတာဖွဈမှာ” “ငါကွညျ့တာမတှပေ့ါဘူး၊အရငျလိုပါပဲ” “အရငျ လိုမဟုတျတော့ဘူးကွီးလာ ပွီ”
“မယုံပါဘူးပွကွညျ့” “ဒီမှာလေ ငါ့နို့ကွီးလာပွီ” နီလာကနို့စူစူလေးကိုပွလသေညျ။ ကနြျောလဲအကငြ်္ီကိုလှနျလိုကျပွီး “ငါလဲစူန တောလားမသိဘူး” “အေး နငျလဲစူနတောပဲ” “နငျ့ဟာကိုငျကွညျ့မယျဟာ၊နငျလဲငါ့ ဟာကိုငျကွညျ့” ကနြျောပွောရငျးနီလာ့နို့ကို ကိုငျလိုကျသညျ။ “နာတယျဟ ဖွေးဖွေးကိုငျ” “ကိုငျလို့မရသေးဘူးနီလာ၊နို့ကဒီ ထကျပိုကွီးမှကိုငျတော့မယျ” “မသာကောငျ၊ နှာဘူး” ထိုသို့ပငျငယျသူငယျခငျြးဖွဈခဲ့ကွ လရော၊အခုတော့သူကအလယျ တနျးပွဆရာမပငျဖွဈနလေပွေီ။ ငယျသူငယျခငျြးဖွဈ သညျ့အတှကျ ကနြျောခကျြခငျြးပငျနီလာဆီကို သှားလိုကျသညျ။ထိုနောကျနီလာကို ချေါပွီးရှပေုဇှနျမှာမနကျစာစားရနျ ချေါလာ ခဲ့လိုကျသညျ။မိနျးကလေး တို့ရဲ့ထုံးစံအသကျသုံးဆယျအရှယျ တငျပွညျ့ပွညျ့ဖွိုးဖွိုးနှငျ့အလှသှေး ကွှယျတတျကွသညျ ဖွဈ၍နီလာ သညျလညျးခတျေစကားအရကိတျ သညျဟုပွောရပမေညျ။တငျထှားပွီး နှငျ့ရငျသားကွီးသညျ။သို့သျောအပြိုဖွဈ၍ခါး တုတျခွငျးမရှိခါးသေး သညျ။
“နီလာ နငျတျောတျောလှလာတယျဟ” “ငါကြှေးမယျလေ” “ဘာကြှေးမှာလဲ” “မနကျစာပွောတာ” “ငါကညစာစားခငျြတာ” “မသာကောငျခုထိနှာဘူးထနတေုနျး” “ငါကဂနျဒူးမှမဟုတျတာ၊ငါကနှာဘူး လေ ဟားးးဟားး” “မသာကောငျသူမြားကိုပွောရရငျ ဒီလိုပဲ” “ကဲပါ ဘာစားမလဲငါမှာလိုကျမယျ” “အေး ရှပေုဇှနျပွငျထားတာလှတယျ နှျော” “အငျးလှတယျ” “အပွနျဓာတျပုံရိုကျပေး ဟာ” “အေးရိုကျပေးမယျ” စားသောကျပွီးအပွနျတှငျဓာတျပုံ ရိုကျရနျအတှကျ “ဟေ့ နငျ့ဖုနျးပေး” နီလာကlockခထြားတာကို ဖွေ၍ ပေးလသေညျ။ကနြျောလဲဖုနျးယူ၍ သူ့အားဓာတျပုံရိုကျပေးလိုကျ၊ပွနျ ကွညျ့လိုကျနှငျ့ ရကေနျဘေးတှငျ ရိုကျပေးလိုကျ သညျ။“ဟငေ့ါ Toiletသှားခငျြတယျ” “သှားလေ ဟိုဘကျမှာဝငျသှားလိုကျ” သူToiletသို့ဝငျသှားစဉျသူ့ဓာတျပုံ မြားကိုကွညျ့နေ လိုကျပွီး သူ့ရဲ့Fbအကောငျ့ကိုကွညျ့စဉျ Fb အကောငျ့ကသူ့အမညျမဟုတျ၊
အကောငျ့အမညျက လမငျးခြို၊ထို အကောငျ့ကိုမွငျဖူးသညျကိုစဉျးစား ပွီးကနြေျာ့၏fake အကောငျ့တှငျ သူငယျခငျြးဖွဈနပွေီး ကား ပွောဖူး သညျကိုသတိရလိုကျသညျ။အပြို ကွီးလိငျကိစ်စကိုစိတျဝငျစားမှနျးတှေးမိပွီးနီလာရောကျလာရာသူ့ ဖုနျးကိုပွနျပေးလိုကျ သညျ။“ကဲနီလာနငျသှားရမယျ့ရုံးကိုလိုကျပို့ပေးမယျ” “အေးလေ သှားကွစို့” သူ့ကိုရုံးကိုပို့ပွီးပွနျလာခဲ့သညျ။ ညနထေမငျးစားအတူ စားဖို့ပွော လိုကျသညျ။ နလေ့ညျကတြော့ကနြျောလဲfbခန ဖှငျ့ကွညျ့ရာလမငျးခြိုအကောငျ့မှ ရနျကုနျရောကျနသေညျဟုတငျထား ပွီးမီးစိမျးနသေဖွငျ့ Hiလိုကျသညျ။ “Hi “ သူပွနျပွီးhi လသေညျ။ “ရနျကုနျရောကျနတေယျဆို” “ဟုတျ” “တဈယောကျတညျးလား” “ဟုတျတဈယောကျတညျး” “ခုဘယျမှာ” “ဟိုတယျမှာပဲ” “ပငျြးနမှောပေါ့” “ပငျြးလဲဘာမှလုပျလို့မှမရတာ” “အဖျောလာ လုပျရမလား” “ဟငျ့အငျးရတယျ၊ဘျောဒါလာလိမျ့မယျ”
“ဘောဒါကယောကျြားလေးလား” “ဟုတျတယျငယျသူငယျခငျြး” “အငျး ရငျခုနျတယျမလား” “ဟငျ့အငျး ခုနျပါဘူး၊သူငယျခငျြးအ ခငျြးခငျြးကို” “ဟုတျလား ““ဟုတျ” ကနြျောလညျးအလုပျဆကျလုပျပွီး စောစောပွနျဖို့စီစဉျပွီးညနနေီလာ့ဆီဖုနျးဆကျလိုကျသညျ၊ “နငျထမငျးမစားရသေးဘူးမဟုတျ လား” “အငျးမစားရသေးဘူး၊နငျ့ကို စောငျ့နတော” “ငါလာခဲ့မယျ” “အေးအေး” ဟိုတယျ ရောကျတော့“ငါရောကျပွီနီလာ” “မွနျလိုကျတာ” “အေးလအေလုပျထဲကတနျးလာ တာပဲ” “ငါတောငျရမေခြိုးရသေးဘူး” “ဟုတျလား ငါတကျလာခဲ့မယျ” “အေးအေး” မနကျပိုငျးကတညျးကအခနျးနံပါတျ သိထားသဖွငျ့ဟိုတယျဝနျထမျးအားမေးရာ လမျးညှနျသဖွငျ့နီလာ့အခနျး ဆီရောကျပွီးတံခါးခေါကျလိုကျ သညျ။နီလာတံခါးလာဖှငျ့ပွီး “ထိုငျလေ ၊ငါရခြေိုးဦးမယျ” “ခြိုးလေ၊ငါ လဲနငျ့နဲ့အတူတူခြိုးမယျ”မသာကောငျ”“ဟားးး” သူရခြေိုးခနျးဝငျသှားသဖွငျ့ထိုငျ စောငျ့ပေးလိုကျပွီးရခြေိုးခနျးကသူ ထှကျလာ တော့ကနြျောလဲရဝေငျခြိုး ပွီးလမျးမှဝယျလာသောအဝတျအ စားကိုဝတျလိုကျသညျ။နီလာကအလှပွငျနတေုနျးပါ။
“ပွီးသေးဘူးလားဟ” “ပွီးတော့မှာပါ” “အေးပါလုပျလုပျ၊နငျ့နဲ့ငါဟိုတယျ ထဲမှာနှဈယောကျတညျး” “နငျကဘာလုပျခငျြလို့လဲမသာ” “ခြောကလကျမှိုတကျကိုစားရ ကောငျးမလားတှေးနတော” “မသာ နငျပဲစီးကရကျမှိုတကျ” “ငါကမှိုမတကျဘူး၊ပွောငျးတိုကျ နေ ကျ” “ဟမျမသာကောငျနားရှကျစရာတှေ” “အမယျ ခုမှနငျကနားရှကျစရာဟုတျ လား၊လမငျးခြိုရဲ့” “အယျမသာ ငါ့အကောငျ့ကို ကွညျ့ ထားတယျပေါ့” “ဟားးးဟားး” “ဟီးရှကျလိုကျတာဟာ”“ရှကျမနပေါနဲ့ဟာလူတိုငျးနီးနီးfake အကောငျ့သုံးကွတာပဲ” “ဟု တယျငါလဲစိတျထှကျပေါကျ အနနေဲ့သုံးတာ” “ဟီးးငါသိပါတယျဟာ” “နငျဘယျသူ့မှမပွောနဲ့နှျော” “မပွောပါဘူးနီလာရယျ” “နငျfakeထဲမှာဘယျသူတှနေဲ့ရငျးနီး လဲ” “ဘယျသူရယျလို့မဟုတျပါဘူး၊နညျး နညျးပါးပါးစကားပွောဖူးသူပဲရှိတာ”နငျသဘောကြ တဲ့သူမရှိဘူးလား” “Fakeထဲမှာဘယျသူ့ကိုယုံရမှာလဲ” “ရှိပါတယျဟ” “ငါတဈခုပွောပွမယျဟ၊ဟိုလေ အပွာစာရေးတဲ့သူတဈ ယောကျရှိ တယျ။စတိဗျတဲ့၊သူနဲ့တော့ဆှေးနှေးဖူးတယျ”
“ဟုတျလား” “ဘာတှဆှေေးနှေးဖူးတာလဲ” “ဝါသနာပါလို့ဒီစာမြိုးရေးတာလား၊ ပိုကျဆံရလို့ရေးတာလားပေါ့” “အငျးဘာပွနျပွော လဲ” “အပငျြးပွရေေးတာတဲ့” “ဟုတျလား” “ပွီးတော့သူရေးတဲ့စာအုပျတှကေို ဖတျဖူးတယျပေါ့၊အဖွဈမှနျတှလေား ဘာလားပေါ့” “အငျး ဘာပွောလဲ” “အဖွဈမှနျပိုမြားပါတယျတဲ့” “နငျအဲဒီလူကိုသဘောကလြား၊ အပွာစာအုပျရေးတဲ့သူပဲနှာဘူးကပြွီးမပွော ဘူးလား” “စကားပွောရတာအဆငျပွတေယျ၊ရိုငျးတာမပွောဘူးဟ” “နငျကဘာလို့သူ့ကိုမေးတာလဲ” “ငါသိခငျြတာတှရှေိလို့ပေါ့ ” “နငျသိခငျြတာအပွငျလူမေးရငျရ သားပဲ”“အပွငျမှာဘယျမေးရဲမလဲ၊ခုကသူ့လဲကိုယျမမွငျဖူးဘူး၊ကိုယျ့လဲသူ မမွငျဖူးလို့မေးရဲတာ” “သူကနငျ့ကိုသိနရေငျဘယျလိုလုပျမ လဲ၊ပွီးတော့နငျ့ကိုသူလာတှရေ့ငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ” “အာ အပွငျမှာတှစေ့ရာအကွောငျး မရှိပါ ဘူး၊ကွောကျစရာကွီး” “နငျကဘာကိုကွောကျတာလဲ” “တျောကွာဘုမယျခညျြးလုပျနရေငျ ဒုကခြ ဟားးးဟားး” “ဟားးး အတှအေ့ကွုံရသှားတာ ပေါ့”
“သလေိုကျပါလား ကွောကျစရာကွီး၊ငါမေးဖူးတယျ ပထမဆုံးအတှအေ့ကွုံကသေ အောငျနာတယျတဲ့” “မနာအောငျလုပျတဲ့နညျးရှိ မှာပါ” “အေးဟဲ့ သူပွောဖူးတယျ ဟားး” “ဘယျလိုပွောတာလဲ” “အဲဒီလိုသာ လိငျဆကျဆံတိုငျးနာ မယျဆိုရငျလငျယူမဲ့သူရှိပါ့မ လားတဲ့” “ဟုတျတယျလေ” “သူကအဲဒီအပိုငျးတကယျ့ဆရာကွီး နှျော ငဂြော့” “ငါလဲဆရာကွီးပါဟ” “လိ့ဆရာကွီး faကောငျက မြား” “နငျအခငျြးခငျြးဆိုရငျသိပျအထငျ သေးတာ”“ရှာနားမှကရြှာနှားမစားဘူးတဲ့” “အိမျမှာလုပျတဲ့လကျလုပျခဉျြက အန်တရယျကငျး တယျ” “အမလေးစကားတတျတယျ၊ လိပျမြိုး” “တကယျပွောတာတကယျလို့သာ နငျအတှအေ့ကွုံလိုခငျြရငျငါ့ကို ပွော” “နငျနဲ့ဆို တော့ဆောရီး၊မကျြနှာပူစ ရာကွီး၊သူနဲ့ဆိုတော့တမြိုး ဟားး” “ငလူးမ” “ငါမေးမယျငဂြော့၊နငျသူနဲ့မသိဘူး လား၊သူလဲနငျ့လို ဆောကျလုပျရေး လုပျတဲ့အငျဂငျြနီယာပဲ” “ဘာလဲငါပွောပေးရမလား”“ဟတေ့ျော တျော၊တှေးမိရငျတောငျ သှေးလနျ့တယျ”
“နငျသူနဲ့ပွောတုနျးဘယျလိုခံစားရ လဲ” “ကွောကျလဲကွောကျမေးလဲမေး ခငျြတာပေါ့” “အပြိုကွီးဆိုတာဒါမြိုးပဲ၊လိုလဲလို ခငျြတယျ နာမှာလဲကွောကျတယျ” “ငါလိုခငျြတယျမပွောမိပါဘူး မသာကောငျ” “ဒါပမေယျ့လိုတော့လိုခငျြတယျ မဟုတျလား” နီလာ့အတှေး ကဘယျလိုနလေဲမခနျ့ မှနျးတတျပေ။ခါတိုငျး cbမှာတော့ ဟိုကိစ်စဒီကိစ်စသူသိခငျြတာတှမေေး ဖူးနပေမေယျ့ကနြျောကိုယျတိုငျက cbမှာမညျသညျ့မိနျးကလေးနှငျ့မဆိုစကားပွောရငျအနှောငျ့အသှားမ လှတျသောစကားကိုပွောလမေ့ ရှိပေ။ယခုတော့ထိုသို့သော လိငျကိစ်စမြိုးပွောဖူးသောသူမှာမိမိသူငယျ ခငျြးအရငျးကွီးဖွဈနသေောအခါ နောကျပွောငျကြီစယျရငျးအနှောငျ့အသှားမလှတျသော စကားမြားကိုပွောမိနသေညျ။နီလာလညျးသူ ငယျခငျြးအရငျးကွီးမို့အရမျးကွီး ရှကျမနဘေဲနှဈယောကျခငျြးမို့စကားတှကွှေယျ နသေညျ။ကွာလြှငျညစာနောကျကတြော့မညျ။“နီလာ နငျစတိဗျ ကိုမွငျဖူးခငျြလား” “နငျမွငျဖူးရငျပွပေးလေ”“စတိကတခွားလူ မဟုတျဘူး၊နငျ့သူငယျခငျြးအရငျးကွီး” “ဟငျဘယျသူလဲ” “ငါလေ” “အမျ မသာတကယျလား” “တကယျပေါ့ဟ” “မယုံရငျဒီမှာ ကွညျ့လေ နငျနဲ့ငါပွော ထားတာတှေ” ” ဟီးမသာ ငါရှကျလိုကျတာဟာ” “ခုမှရှကျမနနေဲ့တော့နီလာရေ သှားကွမယျနောကျကနြေ ပွီ”
“နောကျကမြှကောငျးတယျ၊လူရှငျး တာပေါ့” “လူရှငျးရငျငါမဟုတျတာလုပျမိမယျ ဟ” “နငျ ဟာလတေကယျ့ကောငျပဲ၊ ကိုယျ့ဟာ ကိုယျကအြသုံးမကဘြူး၊ ငါ့ကိုလာခွိမျးခွောကျနတေယျ” “ငါ့ကိုကမြကွောကျဘူးပေါ့” “မကွောကျဘူးဟမေ့ကွောကျဘူး ထ .လာ သှားမယျ”ပွောရငျးဆိုရငျးထသှားသဖွငျ့ ကနြျောလညျးသူ့နောကျကိုထလိုကျ ပွီးအိပျခနျးတံခါးသော့ယူကာပိတျ ပွီးလိုကျရ တော့သညျ။ အခနျးပွငျ ရောကျပွီး receptionနားဖွတျမှလူတှကေငဲ့စောငျးကွညျ့နသေဖွငျ့ “မသာ ငါ့နားကပျဟ ငါ့ကိုတမြိုး ထငျ နမေယျ” “အေးပါဟ” သူ့အနားကပျလမျးလြှောကျပွီးခပျ တညျတညျဖွငျ့လကျကိုကိုငျ၍လမျး လြောကျရာ “မသာ တျောတျော အသားယူတာ ကွညျ့စမျး၊ပိုငျစိုးပိုငျနငျးမဲ့သူ့မိနျးမ ကနြတောပဲ” “လူမွငျရငျကွငျစဦးပေါ့ဟာ” “လုပျမနနေဲ့အိုမငျးရှတျတှနပွေီ” “ဘယျကောငျပွောလဲအိုမငျးရှတျ တတယျလို့” “ဘာဖွဈလို့လဲ” “အခုမှကျောရီးခတျေဟ” “ရှံစရာကွီး” “ဘာရှံစရာလဲမနာလိုမ ရှိနဲ့” ကားပျေါရောကျသညျ့တိုငျပေါကျ ပေါကျဖောကျနကွေသညျ။
စားသောကျဆိုငျရောကျတော့ အအေးခနျးတခနျးယူကာမှာစရာမြားမှာပွီးကနြျောကဘီယာတဈပုလငျးမှာလိုကျသညျ။ “ဘီယာနဲ့မ တညျ့ဘူးဆို”“အာစှတျယုံလောကျပါဟာ” “အေးအမြားကွီးမသောကျနဲ့၊နငျက ကားမောငျးပွီးအိမျပွနျရမှာ” “မပွနျပါဘူး ၊ဒီညနငျနဲ့ အိပျမယျ” “အာ မဖွဈပါဘူး” “ဘာလို့လဲမတှရေ့တာကွာပွီပဲ” “နငျ့အိမျဘယျလိုပွောမလဲ၊နငျ့အမေ အကွောငျးငါသိတယျ” “ငါဒီ ညပွနျမလာဘူးပွောထားတာ”“နငျတော့ပွသနာတကျဦးမယျနှျော နငျ့အမနေဲ့” “မတကပွါဘူးဟ” “အေးပွီးရော” “ငါနငျနဲ့အတူတူ အိပျမှာနှျော” “အာနငျငါ့ကိုဘာမှမလုပျရဘူးနှျော” “ငယျငယျကလိုပေါ့ဟယျ၊လငျမယားလုပျတမျးကစားခငျြလို့” “ငိုးမကလေးဘဝ ကဟာကိုလာပွောနတော” နီလာရှကျသှားသညျ။ဒီကောငျတဈခုခုတော့သိထားပုံရသညျ။ညအိပျ မညျဆိုပဲ။အပြိုကွီးနီလာရငျထဲတ မြိုးဖွဈသှားမိသညျ။ညအိပျလြှငျ ဒီကောငျကငယျငယျကတညျးက လှယျသညျ့အကောငျမဟုတျ။ငါ့မြား ဘုခငျြနလေို့လားတှေးပွီး ရငျထဲတုနျ လှုပျသှားသညျ။သို့သျောဟနျလုပျပွီး မသိခငျြယောငျဆောငျလိုကျသညျ။
ကနြျောလညျး ဘီယာတဈခှကျကိုသောကျခလြိုကျ သညျ။ထို့နောကျနောကျထပျတဈ ခှကျသောကျရနျပွငျရာ “တျောပွီဟကေ့ောငျ ငါ ဘီယာနံ့မခံနိုငျဘူး” “အေးပါဟာ “ စားသောကျပွီးဟိုတယျကိုပွနျလာ ကွသညျ။ဟိုတယျကိုရောကျတော့ ကနြျောကခွေ လကျဆေးကွောပွီး အဝတျလဲလိုကျသညျ။ “ဟကေ့ောငျတကယျအိပျမှာလား” “တကယျပေါ့ဟ၊လငျမယားလုပျ တမျးကစားပါမယျ ဆိုပါမှ” “ဟာ မဖွဈဘူးထငျဟာ၊ငါကွောကျတယျ၊ နငျရောငါရောကလေးတှမေ ဟုတျတော့ဘူး” “နငျကဘာကိုကွောကျတာလဲ” “အာမသိဘူးဟာကွောကျတယျ” “ဘာမှမကွောကျနဲ့မနာစရေဘူး” “ဟာ ဟကေ့ောငျ ငါကွကျသီးထလာပွီ” “ဘယျနားလဲပွစမျးပါ ဦး”“ဒီမှာတှလေ့ား” သူ့လကျမှာကွကျသီးဖုတှထေနေ သညျ” “မကွောကျနဲ့အဲကွကျသီးဖုအာဘှား ပေးလိုကျရငျပြောကျပွီ” သူ့ အနားကပျပွီးနဖူးကိုလှမျးနမျး လိုကျသညျ။နီလာကအတငျးတှနျး ရာကနြျောဖကျထားကနြျောသူ့အား ဖကျလိုကျသညျ။
“ဟဲ့ လှတျဟ ငါယားတယျ” “မလှတျဘူးဟအေ့ပြိုကွီး” အတငျးပငျခြုပျပွီးနှတျခမျးအားနမျး လိုကျသညျ။ “မသာအဲလောကျ တောငျနမျးခငျြရငျ နမျး..နမျး ပွီးမှနငျ့အမနေဲ့တိုငျမယျ” တမငျပငျနှတျခမျးကိုနမျးစုပျလိုကျ တော့သညျ။ပထမတော့နီလာငွိမျ နသေညျ။အနမျးနှေးနှေးကတမြိုးဖွဈလာသညျ။ပွနျနမျးလိုကျသညျ။ ပွီးမှစိတျထဲတမြိုးကွီးဆိုမှတမြိုး ကွီး “တျောပွီဟာ ငဂြော့ ငါကွောကျတယျ” တကယျလညျးကွောကျသညျ။ ငဂြော့စိတျကဘယျလိုနလေဲမသိ မိမိစိတျကိုတောငျမယုံခငျြ ကွာလြှငျ စိတျပါ သှားနိုငျသညျမဟုတျလား။ လိငျဆကျဆံမှု့ကိုလကျတှကေ့ကြ မလုပျဖူးပမေယျ့မူဗီကွညျ့ရငျးမိမိ၏လိငျစိတျကိုမိမိလကျဖွငျ့ ဖွဖြေောကျ ဖူးသညျ။ယခုလိုငဂြော့နှငျ့နီးနီးကပျ နဖေူးသောအခါစိတျထဲသာယာသလိုဖွဈလာသညျ။ ကနြျောကရပျမပဈဘဲနီလာ့ လညျ ပငျးကိုစုပျလိုကျရာ “ငဂြော့ ငါကွောကျတယျဟ” “နငျကဘာကိုကွောကျတာလဲ၊ မတျောတဆ ဗိုကျကွီးသှားရငျဘယျ လို လုပျမလဲ” “လုပျတိုငျးဗိုကျမကွီးပါဘူးဟာ” “အာ အကာအကှယျမပါဘူးနှျော” “ပါပါတယျဟ စိတျမပူနဲ့” “ဟမျ နငျကွံစညျထားတာ လား” “တမငျကွီးကွံစညျတာမြိုးတော့ မဟုတျရပါဘူးဟာ” “နငျနျော ငါကွောကျတယျ” နီလာတကယျကိုကွောကျတယျ။
သူ့လီးကနီလာ့ပေါငျကွားကိုလာ ထောကျနတေယျ။ပူနှေးနှေးမာ တောငျ့တောငျ့ကွီး စိတျထဲတမြိုးကွီးဆိုမှတမြိုးကွီး။ ကွောကျ ပမေယျ့နီလာ့အဝှာကစိုခငျြနပွေီ။ “ငါနို့စို့မယျဟာ” “အာ ငဂြော့နငျနှျော” ငဂြော့ကနီလာ့ အဝတျကိုမတငျလိုကျတော့ဘရာ ပျေါလာတယျ၊ဘရာကိုမတငျပွနျ တယျ။နီလာ့နို့လုံးဝိုငျးဝိုငျးတှပေျေါ လာတယျ။ “အငျးငယျငယျတုနျးကလိုမဟုတျ တော့ဘူး” “အာ ဟကေ့ောငျ “ နီလာရှကျသှားရတယျ။သူကနီလာ့နို့ကိုလြှာဖြားလေးနှငျ့ထိတှလေို့ကျ တော့နီလာနို့သီးခေါငျးလေးကခြှနျ လာ သလိုနို့တအုံလုံးကွကျသီးဖု တှထေသှားရပွနျတယျ။ကငျြတကျ တကျခံစားမှု့နှငျ့အတူအထိအတှေ့ ရဲ့ခံစားမှု့ရသတမြိုးကိုခံစား လိုကျရ ပွနျတယျ။အလိုလိုညညျးမိတယျ။ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ” “အာ့ အငျးးဟငျးးဟငျးးး” “ဂြော့ ငါ မနတေတျဘူး၊တျောပွီ” ကနြျော လဲနို့သီးခေါငျးဖြားလေးကိုလြှာနှငျ့ထိုးမှပွေီး ယကျလိုကျနို့အုံတဈခုလုံးကိုစို့လိုကျ နဲ့လုပျလိုကျတဲ့အခါမှာတော့နီလာတဈယောကျအျောညညျးသံမြားထှကျ၍ပငျလာသညျ။
ဂြော့ရဲ့လကျကနီလာ့ရဲ့ပိပိအပျေါ ကနအေုပျကာပှတျပေးလတေော့ နီလာတှနျ့ကနဲ့ဖွဈသှားပွီးပိပိတအုံလုံးစိုသှားသလိုခံစားလိုကျရ ပွီးရငျထဲသိမျ့သိမျ့တုနျသှားရသညျ။ အပျေါမှပှတျရုံမကအကှဲကွောငျးတ လြောကျတဖွေးဖွေးပှငျပေးရာပိပိ တအုံလုံးကွှတကျလာ လသေလား ထငျမှတျရအောငျဖောငျးကွှလာခဲ့ သညျ။အကှဲကွောငျးအလြောကျစုံ ဆနျလှုပျရှားပွီးနောကျမှာအကှဲ ကွောငျး အပျေါနားအစနေ့ာရာနား ကိုလကျခလယျဖွငျ့ဖွေးဖွေးခငျြး ပှတျလရော “အာ့!အငျး ဟငျးးဟငျးးး” မိမိလုပျဖူးသျောလညျး ယခု အထိအတှနှေ့ငျ့မတူပေ၊စိတျ တို့ခကျြခငျြးထကွှလာသညျ။မကျြလုံးစုံမှိတျအျောညညျးမိသညျ။ ထိုစဉျမှာပငျဂြော့သညျနီလာ့နှုတျ ခမျးအားစုပျနမျးလရောနီလာလညျးစိတျမထိနျးနိုငျပဲပွနျလညျစုပျနမျး လိုကျတော့သညျ။ ငဂြော့ဤမြှလုပျတတျလိမျ့မညျဟုမထငျခဲ့ ပေ။နီလာ၏ကာမစိတျကိုတ ဖွေးဖွေးထကွှလာအောငျလုပျ ဆောငျပေးခွငျးကွောငျ့နီလာ့၏ ကာမစိတျတို့အထှဋျအထိပျသို့ ရောကျရှိလုနီးနီးဖွဈလာသညျ။
ထိုသို့ဖွဈနစေဉျမှာပငျဂြော့ကရပျ ပဈလိုကျသညျ။ နီလာမကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျစဉျ ဂြော့ကအဝတျတှကေိုခြှတျပဈလိုကျ သညျကို တှလေို့ကျသညျ။မကျြလုံးကအလိုအလြောကျပငျဂြော့၏ ပေါငျကွားနရောကိုကွညျ့စဉျမာ ၍ထောငျမတျနသေောဂြော့လီးကွီးအား တှလေို့ကျရသညျ။ အပွငျတှငျဤမြှကွီးမညျဟုထငျ မှတျမထားသောလီးသညျငါးမတျ လုံးမြှမကနိုငျပေ။အရှညျသညျ လညျး ခွောကျလကျမစှနျးစှနျးရှိ လောကျသညျ။ “ဂြော့” “ပွောလနေီလာ” “ငါကွောကျတယျ” “မကွောကျနဲ့သူကလိမ်မာတယျ၊ နငျ့ကိုမ နာစရေဘူး” “အာ “ “ကိုငျကွညျ့နီလာ” နီလာ့လကျကိုကိုငျပွီးလီးပျေါတငျ ပေးရာနီလာလညျးအယောငျယောငျ အမှားမှားပငျကိုငျ ထားမိသညျ။အထိအတှမှေ့ာတခွားသောနရောမြား နှငျ့မတူပေ။ပူနှေးနှေးကလေးနှငျ့တ မြိုးလေးဖွဈရသညျ။ဂြော့ကနီလာ့လကျ ကိုဆုပျကိုငျပွီးလကျကိုလီးအရငျးထိဆှဲခလြိုကျရာနီရဲသောထိပျဖူး ကွီးကပျေါလာကာဒဈကကားကား ကွီးဖွဈနသေညျ။နီလာတှေး မိသညျက မှိုလိုလိုလီးလိုလိုဟူသောစကား ပငျဖွဈသညျ။မှိုပှငျ့ပမာဖွဈ၍လူတို့ တငျစားကွဟနျရှိသညျကိုတှေးမိ လိုကျ သညျ။
“ဘယျလိုလဲနီလာ” “အကွီးကွီးပဲဟာ၊နိုငျငံခွားမူဗီထဲ ကလောကျရှိတယျ” “ပုံမှနျအဆငျ့ပါပဲနီလာရယျ” “ဟုတျရဲ့လားဟယျငါက အပွငျမှာကလေးတှဟောပဲတှဖေူ့းတယျ” “အငျးလနေငျကအပြိုကွီးပဲဥစ်စာ” “နငျနှျော” “နငျ့ကိုလောကနိဗ်ဗာနျကိုပို့အုံးမယျ” “ဟငျ ဘယျလို” “နငျ့ဟာကိုနမျးပေးအုံးမယျ” “အာ မလုပျနဲ့ဟာ၊ရှကျစရာကွီး” “နငျကွိုကျသှားမှာပါ” “အာ” နီလာရှကျသှားရ ပွနျသညျ။အမှနျ တော့မူဗီတှမှောမွငျဖူးတော့အနမျး ခံကွညျ့ခငျြခဲ့သညျ။သို့သျောမိမိမှာ ခဈြသူမှမရှိခဲ့ပါ။ယခုမူသူငယျခငျြး အရငျးကွီးကနမျးပေးမညျဆိုသောအခါရငျတုနျမိသညျ။ဂြော့ကနီလာ့ ပေါငျကွားကိုဝငျကာမကျြနှာအပျ တော့မသိစိတျ၏လှုံ့ဆျော မှု့ကွောငျ့ပေါငျကိုဟလိုကျမိသညျ။ဂြော့က ပေါငျကိုမတငျပွီးစိုရှဲနသေောမိမိပိပိ အားလြှာနှငျ့အပွားလိုကျယကျလိုကျသောအခါ “အားးး! “ လူကတုနျယငျသှားသညျ၊ပူနှေးစို စှတျသောလြှာကအကှဲကွောငျးတ လြောကျထိထိမိမိယကျသှားခြေ သညျ။ထိုနောကျ လြှာဖြားကအကှဲ ကွောငျးတလြောကျတိုးဝငျလာပွီး နှုတျခမျးသားမြားအားပှတျဆှဲသှား ပွနျသညျ။
“အားးးအီးးဟီးးဟီးးး” ခါးကလပေျေါကွှသှားသညျ။ပိပိတို့ မော့ဖောငျးလာသညျ။လကျကအိပျ ရာခငျးကိုသာတငျးတငျးဆုပျကိုငျ မိတော့သညျ၊ “အာ့! အငျးးဟငျးးးဟငျးးးရှီးးရှီးး” တရှီးရှီးနဲ့အရမျးကောငျးနသေညျ။ အစကေို့လြှာနှငျ့ထိုးမှပွေီးတပွှတျ ပွှတျစုပျ ပွနျသညျ။ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ” “အာ့အိုးးရှီးးရှီးးးအိုးးအားး” “အားဂြော့ အားးရှီးးရှီးးးအားငါပွီး တော့မယျ အားရှီးးရှီးးး အားး” တကယျပါဒီလိုပွီးသောအရာသာ မြိုးမတှဖေူ့းသေးသောနီလာ့အဖို့ စိတျကကနြေပျမိတော့သညျ၊ “နီလာပွီးသှားပွီလား” “အငျးး “ “ကွိုကျရဲ့လား” “အငျးးအားနာလိုကျတာဟာ” “အားနာမနနေဲ့ဘာပဲဖွဈဖွဈလုပျမှ တော့အဆုံးထိသှားမှကောငျးတာ” “အငျးပါ၊ နငျလုပျခငျြလို့မဟုတျလား” “အငျးပေါ့ဟ” “နငျလုပျခငျြရငျလုပျတော့၊ဗိုကျ မကွီးစနေဲ့၊ကွီးရငျနငျတာဝနျယူ” “အငျးပါဟာ” ဂြော့က ကှနျဒှနျထုပျကိုဖောကျပွီး သူ့ရဲ့မာနတေဲ့လီးပျေါစှပျခလြိုကျ သညျ။ထိုနောကျနောကျထပျအထုပျတဈထုပျကိုဖောကျပွီးစှပျထားသော ကှနျဒုံးပျေါမှာသုပျလိမျးလိုကျသညျ “ဂြော့ဖွေးဖွေးလုပျနှျော” “အငျးပါဟ” ကနြျောလညျးနီလာ့ပေါငျကွားဝငျ ပွီးပိပိအဝကိုဂြေ ထပျသုပျပွီးလီးတဲ့ကာတဖွေးဖွေးနှငျ့ဖိသှငျးလိုကျ သညျ
“ဗဈြ ဗဈြ ဗဈြ” “အာ့ ဖွေးဖွေးနညျးနညျးနာတယျ” တဝကျတောငျမဝငျသေးပေ၊ နာတယျပွောပွီးပေါငျတှငျးသားမြားကိုနီလာက ညှဈထားသညျ။ “စိတျလြှော့ထားနီလာ” “အငျးပါ” ကနြျောလညျးနီလာ့နို့ကိုစို့ပွီးနီလာ့ စိတျကိုလြော့ထားစသေညျ။ လီးကတငျး ကွပျကွပျဆို့ဆို့ကွီးဝငျ လာပွီးပိပိအတှငျးသားမြားကနာ ကငျြနတောမို့ဂြော့ကိုပွောလိုကျ သညျ။ ဗဈြ ဗဈြ ဗြိ” “အာ့!ဂြော့ နာ တယျ.ဖွေးဖွေးလုပျပါ” လီးကိုတဆုံးအထိသှငျးပွီးနီလာ့ရဲ့ ခါးကိုလှမျးဆှဲပွီးတဖနျးဖနျးမွညျ အောငျလိုးလိုကျတော့တယျ။ကရေဲ့ လုံးကဈြကဈြခါးလေးကိုကိုငျပွီးလိုးတာမို့ကိုကို့စိတျတှထေနျနလေို့လားမသိဘူးမွနျမွနျလေးဆောငျ့လိုး တော့ကမှေ့ာရှကေို့လဲမ သှားရ အောငျထိနျးထားရတယျ။ကပျြကပျြ တညျးတညျးပိပိလေးကိုဂြော့ရဲ့လီးကထိုးခှဲပွီးဝငျလာတယျ။ “ဘှတျ ဖှတျ ဖနျးဖနျးဖနျးး” “အာ့အိုးးရှီးးရှီးးး” ပုံစံပွောငျးပွီးလြော့သှားတဲ့ကာမ စိတျကကကေို့တဖနျပွနျတကျ လာစတေယျ။
ဒီအကွိမျကတော့ဝငျခကျြ တိုငျးထိစတေယျ။သားအိမျနားအထိကိုရောကျနတောကွောငျ့ပိုပွီးအရပျပုတဲ့ကအေတှကျအောငျ့လာ တယျ။ “ဖှတျ ဖနျးးဖနျးးဖနျးး” “အာ့ရှီးးရှီးးးအိုးး နာတယျဂြော့” ကနြျောကလဲအပြိုကွီးပိပိကိုအပီအပွငျလိုးရတာကွောငျ့ကွပျ ထုပျနတောမို့ခြော့လိုးတယျဆိုပေ မယျ့ပွီးခငျြသလိုဖွဈနေ တာကွောငျ့ “ငါပွီးတော့မယျ နီလာ” “ဟားးတပျထှကျလား” “လိ့ တပျထှကျဖွဈရမလား” စိတျကိုထိနျးပွီးလိုးလိုကျတော့သညျ။ “ဖှတျ ဖနျး ဖနျးးဘှတျ ဘှတျ ဖနျး” “အာ့ရှီးးရှီးးးအားပွီးပွီ အိုးး” နီလာလညျးကာမဆကျဆံဖူးတာဒီတကွိမျထဲဆိုဆိုသလောကျအရသာထူးထူးဆနျးဆနျးကိုခံစားလိုကျပွီးပိပိထဲကအရညျတှစေိမျ့ ထှကျသှားသလိုခံစားရတယျ။တကိုယျလုံးလညျးတုနျယငျကာဆငျးသှားပွီးပါးစပျထဲကအီးကနဲအသံထှကျသှားတော့ တယျ။သိပျမ ကွာတော့တဲ့အခြိနျမှာ ဂြော့လီးပြော့သှားမှနျးသိလိုကျရတယျ။သူပွီးသှားတာကှနျဒှနျးထဲမှာဆိုတော့နီလာသိပျမစိုးရိမျတော့ပါဘူး။ နီလာလဲမောပနျးသ လိုဖွဈပွီးအားကုနျသှားသလိုခံစားလိုကျရပွီးကုတငျပျေါမှောကျကကြာခနမှိနျးနပေမေယျ့ဂြော့ကတော့ အမောဖွပွေီးနီလာ့ကိုဖကျထား တယျလေ။
“နီလာ ကောငျးရဲ့လား” နီလာကောငျးတယျလို့တော့နှုတျမှမဖွရေဲပါဘူး။နောကျတကွိမျထပျ လုပျမှာလဲစိုးရိမျတယျ။ပိပိလေးက ကွိမျးစပျနာကငျြနတောကွောငျ့ “အရမျးနာတယျဂြော့၊ကွိမျးစပျနတောပဲငါ့ဟာလေးတော့ကှဲပွဲသှား ပွီလားမသိတော့ဘူး” “မ ကှဲပါဘူးနီလာရယျ၊အပြိုစဈစဈ လေးမိုပထမအကွိမျကဒီလိုပဲတဲ့၊ နောကျအကွိမျဆိုရငျနာတာပြောကျ ပွီးဖီးလျတှရှေိတော့မှာ” “နောကျတကွိမျမလုပျရဲတော့ဘူး၊ခု တောငျအရမျးနာနပွေီ” “အငျး ခုနောကျထပျမလုပျတော့ဘူး လေ၊နောကျရကျမှလုပျမှာ” “တျောပွီ၊နငျမလာနဲ့တော့” “လာမှာပဲ” “ငါဗိုကျကွီးရငျဘယျလိုလုပျမှာလဲ ၊ပွသနာတှကွေီးမယျ” “ဗိုကျကွီးရငျနငျ့ကိုငါယူမယျ” “လိတောငျနငျ့ကိုမယူဘူး” “ဘာလိုလဲဟ” “ယူစရာလား၊ယူမှသောကျပွောခံရ မယျ့ဟာ” “ဟာ ဘာဆိုငျလို့၊ဘယျသူကပွော မှာ လဲ” “ပွောကွမှာပဲ အမိဖမျးတယျလို့” “အေးပါဟာ” စကားပွောနရေငျးနို့ကိုလာကလိ ပွနျတယျ။မထိတထိနဲ့လုပျနပွေနျပွီ ဂြော့ ရဲ့လှုံ့ဆျောမှု့ကွောငျ့ကာမစိတျကတဖနျဖွဈလာ ပွနျရော။ဒီလိုနဲ့နောကျတကွိမျပွနျစဖို့ရာတာစူလာခဲ့တယျ။
ဒုတိယအကွိမျမှာတော့ပထမကွိမျတုနျးကလိုကွောကျရှံခွငျးမရှိတော့ပဲပိုမိုရဲတငျးသလိုဖွဈလာခဲ့တယျ။ “နီလာငါ့ညီလေးကိုနမျး ပေးပါလား” “အေးပါ ငါတော့သိပျမလုပျတတျဘူး” “မူဗီထဲကလိုလုပျပေါ့ဟာ” “အေးလုပျကွညျ့မယျ” နီလာဂြော့လီးကိုလြှာနဲ့အ ရငျတို့ ကွညျ့ပွီးငုံစုပျကွညျ့တယျ။စုပျရတာ တမြိုးလေးမို့စမျးသတျစုပျပွီးနောကျအဆငျပွတောနဲ့မူဗီထဲကလိုပဲစုပျပေးလိုကျ တယျ။ငဂြော့ဆိုတအား အားတအီးအီးနဲ့ညညျးနတော။ ခုတော့နီလာလီးကွီးကိုငုံစုပျတတျခဲ့တယျ။ ဂြော့ရဲ့ရဲ့စုပျယကျမှု့မှာလဲ သာယာ တတျခဲ့ပွီ။ကွိုကျလညျးကွိုကျသှား မိတယျ။ဂြော့ဟာကာမဆကျဆံမှု့မှာ ဆရာတဈဆူဖွဈနပွေီဆိုတာသိ လိုကျတော့ တယျ။“ပွှတျ! ပွှတျ..ပွှတျ” “အာ့!ဖွေးဖွေးဟ “ “ပွှတျ ပွှတျပွှတျ” စုပျရုံမကလြှာဖြားနှငျ့ပငျထိုးမှေ ပေးလိုကျသညျ။ဒဈဖြားကို လညျး လြှာနှငျ့ရဈပတျပွီးယကျလိုကျရာ “အာ့ ရှီးးရှီးးးအားး ကောငျးလိုကျတာနီလာရယျ” လူကကော့ကော့ပွီးအျောညညျးနေ သညျ၊ဂှေးဥလေးကိုမနာကငျြစဘေဲဖဈြညဈပွီး စုပျပေးလိုကျသညျ “ွပွတျ!” “အိုး ရှီးးရှီးးး” ဂြော့လီးကအလှနျအမငျးကွီးလာ သလိုဖွဈလာသညျ။အကွောပြိုငျး ပြိုငျးထ၍မာကွောမှု့ကသံခြောငျး တခြောငျးအလားပငျဖွဈလာသညျ။
“နီလာငါမရတော့ဘူးဟာလုပျခငျြပွီ” “နငျလုပျခငျြရငျလုပျလေ” “အငျး ငါ့အကွိုကျပုံစံပွငျလိုကျမယျ” နီလာအားကုတငျပျေါကနျ့လနျ့လုပျ ပွီးခါးကိုကုတငျဘောငျဘေးအထိဆှဲကာယူလိုကျသညျ။ထို့နောကျမှာ တော့ကနြျောကကုတငျအောကျတှငျမတျတပျ ရပျပွီးနီလာ့ခါးအောကျ ခေါငျးအုံးဆှဲယူကာခုလိုကျသညျ၊ နီလာ့အဖုတျကဖောငျးပွီးမို့မောကျနသေညျ။ခွနှေဈခြောငျးမ၍ထောငျ လိုကျကာပိပိထဲလီးတကေ့ာဖိခြ လိုကျသညျ။ “ဗဈြ ဗဈြ ဗွိ” “အို့! အာ့! အားးး” “ဖွေးဖွေးလုပျပါဂြော့ရာ” “အငျးပါဟ” နို့ကိုစို့ ပွီးဖွေးဖွေးခငျြးပငျအသှငျး အထုတျလုပျလိုကျသညျ။ “ဘှတျ ဗဈြ ဖှတျ ဖှတျ ဖတျဖတျ” “အငျးးဟငျးးဟငျးးး” လီးဒဈကပိပိ အတှငျးသားတ လြောကျပှတျဆှဲသှားလသေညျ။ အသှငျးအထုတျတို့ညကျညောလှ သညျ။အစကေို့ထိသှားသညျ။နီလာ ညညျး လောကျအောငျအသညျးခိုကျ ကောငျးလှနျးလသေညျ။အရှိနျတကျ လာသောကာမစိတျတို့အလြှံတညီး ညီးလောငျမွိုကျလာသညျ၊ တဖတျ ဖတျနှငျ့အသားစိုငျခငျြးထိသံတို့က စညျးခကျြတကပြငျထှကျပျေါလာ သညျ။ “ဖတျ ဖှတျ ဘှတျ ဖှတျဗြိ ဗြိ” “အာ့အိုးး အာ့ အငျးးဟငျးးး” လီးကအဝငျအတှကျကပိုမွနျလေ ကာမစိတျကိုပိုကွှလေ။ပိုညညျးလေ မကျြလုံးကိုမှိတျနှုတျခမျးကိုကိုကျ၍ဂြော့ လညျပငျးကိုဖကျထားမိသညျ။
ဆောငျ့ခကျြတို့၏စှမျးအားကွောငျ့ ပငျနီလာစိတျကပိုကွှပွီး ပွီးဖို့ဖွဈ လာသညျ။အထှဋျအထိပျရောကျ လပွေီးခါနီးလေ အျော ညညျးမိလေ၊ “ဖှတျဖနျးးဖနျးးဖနျးးးးဖနျးး” “အာ့ရှီးးးရှီးးးရှီးးး” နို့စို့နရေငျးလုပျနရောမှရပျပွီးမတျ တပျပငျဆကျလိုးနပွေီးကာမစေ့ နရောအားလကျဖွငျ့ပှတျပေးရာ “အားးရှီးးရှီးးးးအားငါပွီးတော့မယျ” နီလာ့အသံကပွီးခါနီးလပေိုညညျး လဖွေဈလာသဖွငျ့ကြ နျောလညျး စိတျကိုမတငျးထားပဲစိတျကိုလှတျခြ ပွီးတခကျြခငျြးဆောငျ့လိုးလိုကျ သညျ။ “ဘှတျဖှတျ ဖနျးဖနျးးဖနျးး” “အာ့ အိုး အီးးးးအားးးရှီးးရှီး” ဆတျကနဲတုနျပွီး နီလာပွီးသှားတော့သညျ။ဂြော့ လညျးဆကျတိုကျလှုပျရှားပွီးမကွာမီပငျအီးအားအျောရငျးပွီး သှားတော့သညျ။ထို့နောကျသူ့လီးမှကှနျဒှနျကိုခြှတျပွီးအမှိုကျတောငျးတှငျသှားပဈရာနီလာမှအိပျရာကထပွီးတဈရှူး မြားယူပွီး ဂြော့အလာကိုစောငျ့လိုကျသညျ။ဂြော့မှာအေးကှနျးခနျးထဲခြှေးမြားပြံလကျြရှိနသေညျမ ဟုတျလားထို့ကွောငျ့ဂြော့ကနီလာ့အနား လာမှအိပျရာမှထ၍ခြှေးမြား ကိုသုတျပေးလိုကျတော့သညျ။ ဂြော့ကပွုံးလြှကျပငျ “အဆငျပွရေဲ့လားနီလာ” “လိအဆငျပွလေား၊ အလကားရရငျ ရတေောငျဗိုကျကားအောငျသောကျ တဲ့ကောငျ၊လုပျတာမခြိမဆနျ့နှငျ့ခံရ တဲ့လူကိုမငဲ့ညာဘူး” “ဒီဟာကဒီလိုလုပျ မှထိတာနငျသိပါတယျ” “လိတောငျမသိဘူးဟကေ့ောငျ၊စ ကားမပွောနဲ့တော့မောနပွေီမဟုတျလားအိပျတော့” “အေးပါဟာ” ဂြော့ကနီလာ့ကိုဖကျ၍အိပျရာနီလာ လညျးကနြေပျရပွနျသညျ။နောကျတော့နီလာလညျးအိပျပြျောသှားတော့ သညျ။
နှဈယောကျသားဖကျပွီး အိပျပြျောသှားကွတယျ။နီလာလညျးနှိုကျခွိုကျစှာအိပျပြျောသှားပွီးပွနျ နိုးလာတော့ကိုယျတျောခြောက နီ လာ့ကိုဖကျထားသေးတယျ။ ဂြောရရဲ့လီးကမာတောငျနတေဲ့ပုံရ တယျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့နီလာကို လာထောကျနသေညျ။ နီလာ ကွားဖူးတာကယောကျြား လေးတှကေမနကျပိုငျးဆိုဟိုမုနျးထ ကွှတယျတဲ့။ဒီအခြိနျဆိုရငျတောငျ နလေရှေိ့တယျတဲ့လေ။နီလာက ဂြော့ဟာကိုကိုငျကွညျ့ခငျြလာ တာကွောငျ့ကိုငျကွညျ့လိုကျတယျ။ ပူနှေးနှေးမာတောငျ့တောငျ့လေးနဲ့ ကနျြတဲ့အသားထိကွညျ့သလို မြိုးမ နတောကွောငျ့ကိုငျရတာတမြိုးလေးဖွဈတော့ကိုငျကွညျ့ရငျးဖှဖှလေး ဆုပျကိုငျပေးလိုကျရာဂြော့နိုးလာ ပွီး “နီလာလုပျရငျ လဲသခြောလုပျပေးလေ” “ဟမျ.. ငါကဘယျလိုလုပျပေးရမှာလဲ” ဂြော့ကပကျလကျလှနျလိုကျပွီး “လာ.ဒီလိုလုပျ” ဂြော့က နီလာ လကျကိုကိုငျပွီး ဂှငျးတိုကျသလိုလုပျပွလိုကျရာ နီလာလညျးဂြော့ပွသကဲ့သို့လုပျ လိုကျသညျ။ ဂြော့လီးကထိပျဖူးကွီးကားလာ ကာတဖွေးဖွေးမာပွီးကွီးရှညျလာ သညျ။ “ကွီးလာပွီဟ ဂြော့ရ” “အေးလေ သူကလုပျခငျြနတောကို” “လုပျမနနေဲ့တော့ ဗိုကျ ဆာနပွေီ၊မ နကျစာသှားစားကွမယျ” “လုပျစမျးပါဦးနီလာရယျ၊ငါ ကောငျးနပွေီ” နီလာဂှငျးတိုကျပေးရငျးနှငျ့ကွီး ကာတ ဆတျဆတျတောငျလာသော လီးကိုစိတျထဲတမြိုးဖွဈလာပွီး ခေါငျးငုံ့ကာတခကျြငုံစုပျလိုကျသညျ
“ွပွတျ” “အားး ရှီးးး” “”လုပျမနနေဲ့တော့တျောပွီ ဗိုကျလဲဆာပွီ” ဟုပွောပွီးနီလာကုတငျပျေါကဆငျးပွေးတော့သညျ။ “ဟာ ကှာ ကောငျးခနျးရောကျမှတနျး လနျးကွီးကှာ” “ခဈခဈ ခဈ” နီလာရခြေိုးခနျးတံခါးကဂြော့ကို ကွညျ့လိုကျပွီးတံခါးပိတျထား လိုကျ သညျ။ ဂြော့လီးတရမျးတရမျးနဲ့ကနျြခဲ့ သညျ့အဖွဈကိုကွညျ့ပွီးရီလိုကျသညျ။ “နီလာနငျတျောတျောဆိုးတယျ ငါတော့ဒုက်ခရောကျ ပွီ” “ဟားးဟားးသလေိုကျလေ” နီလာမကျြနှာသဈရခြေိုးပွီးသဘကျပတျကာအပွငျကိုထှကျလိုကျ ရာဂြော့လီးမှာမပြော့သေးပဲ တောငျနလေကျြပငျရှိသေးသညျ “အမယျ မပြော့သေးဘူးကွညျ့စမျး” “ဘယျပြော့မလဲ နငျက အာငှပေ့ေး သှားတာကိုး” “ခဈ ခဈ ခဈ၊ကဲပါမနကျစာစားပွီးမှ သူ့ကိုဆကျပွီးအနိုငျကငျြ့မယျ” “အေးပါအဲဒီအခြိနျငါလဲနငျ့ညီမ လေးကိုအနိုငျကငျြ့မှာ” “ပငျြးသေး တယျသိလားဟကေ့ောငျ” “အေးပါ ကွညျ့ကွသေးတာပေါ့” ကနြျောလညျးရခြေိုးခနျးထဲဝငျရငျးမကျြနှာသဈသှားတိုကျပွီးရခြေိုး လိုကျသညျ။အပွငျကိုထှကျလာရာ နီလာကအဝတျအစားဝတျပွီးမိတျကပျပါးပါးအုပျထားပွီးဖွဈနသေညျ။
နီလာ့ကိုမွငျမှလီးကပွနျတောငျခငျြလာသညျ။အတှငျးခံကောကျစှပျ ပွီးနောကျအတှငျးခံထဲမှလီးကဖု ဖောငျးကာရုနျးကနျနရေ ရှာသညျ။ ပုဆိုးတဈထညျကောကျဝတျပွီးအပျေါကအကင်္ငြ်္ီဝတျကာခေါငျး ဖွီးပွီးနောကျ “ရပွီ သှားတော့မလား” “အေးသှား မယျလေ”နီလာတံခါးနားမသှားခငျဂြော့ နားကပျပွီးဖုဖောငျးနသေောနရော ကိုတခကျြသှားကိုငျပွီးတံခါးဝသှား ကာလြှာထုတျ ပွောငျပွလိုကျသညျ။ “နငျနှျော ငါ့ကိုအရှကျခှဲနတော” “ခဈ ခဈ ခဈ” ဟိုတယျကမနကျစာဘူးဖေးကြှေး တော့ဟိုတယျက အစားအစာမြားကို ဟိုနညျးနညျးဒီနညျးနညျးယူစား လိုကျသညျ။နီလာကအတှေးတ ခကျြပေါကျကာဂြော့နားကိုကပျ ပွီး လငျမယားပုံစံပေါကျအောငျလုပျ နလေိုကျသညျ။နီလာထိုကဲ့သို့ လုပျလကေနြေျာ့မှာအသဲယားလေ ဖွဈလာပွီး “နီလာငါလူရှသေူ့ ရှဖေ့ကျနမျးမိ မယျ” “ဟ.ဟားး” “မလုပျလို့မဖွဈဘူးဟဲ့၊လူတှကေညားခါစလငျမယားလိုထငျအောငျ လုပျနရေတာ” “အငျး ပါ.အငျးပါ” မခငျြ့မရဲဖွဈနသေောဂြော့ပုံစံ ကွညျ့ပွီးစိတျထဲရီလဲရီခငျြတယျ။
“ငါအအေးသောကျဦးမယျဂြော့ ထယူပေး” “အငျးပါ” ဂြော့ကိုတမငျညငျးဆဲလိုကျသညျ။ ဂြော့ကခန်ဓာကိုယျကိုခပျယို့ယို့လုပျ ပွီး သှားယူနတေဲ့ပုံကိုဓာတျပုံလှမျး ရိုကျလိုကျသေးတယျ။သူမတျတပျ ရပျနလေို့မရတဲ့ပုံပျေါနတေယျ၊မတျတပျတာသာရပိရငျသူ့ဟာ ကွီးကရှငေ့ေါထှကျနမှောမွငျယောငျနမေိ တယျလေ။ဂြော့အအေးခှကျယူ လာပွီးပေးတော့ကွညျပွာယူ သောကျတယျ။ “ဂြော့ နငျတျောပွီလား” “အငျးလေ” “အစားနညျးလှခညျြလား” “ဗိုကျအရမျးတငျးနလေို့မဖွဈဘူး” “ဟငျဘာလို့လဲ” “ဟငျးးဟငျးးး” နီလာသိလိုကျပွီ၊ကာမဆကျဆံ ခငျြရငျဗိုကျအရမျးတငျးနလေို့မဘူးဆိုတာကိုပေါ့ နီလာပုခုံးတှနျ့ပွပွီးမကျြလုံး ပွူးပွလိုကျသညျ။ နီလာဒီတဈ ခေါကျခရီးထှကျရတာပြျောနသေညျ။စိတျလှတျကိုယျလှတျရှိသလို လဲဖွဈရသညျ။ စားသောကျပွီးရုံးသှားရနျကလဲစော သေးသညျမို့ဟိုတယျဘကျပွနျလာလိုကျသညျ။ အခနျးထဲရောကျသညျနှငျ့ဂြော့က နီလာကိုဖကျကာပှခြေီ့လိုကျ သညျ။
“ဟာ ဟကေ့ောငျ” နီလာပထမတော့လနျ့သှားပွီး ဂြော့မကျြနှာကိုကွညျ့လိုကျသညျ။ ဂြော့ကနီလာကိုကုတငျပျေါ အသာအယာခြ လိုကျပွီးနှုတျခမျး သားမြားကိုစုပျယူတော့သညျ၊ “ပွှတျ..ပွှတျ” မညျသို့သောအကွောငျးတရားတှေ ကိုနီလာမသိပွနျနမျးခငျြလာ သဖွငျ့နီလာပွနျနမျးစုပျလိုကျသညျ။ဂြော့အနမျးကနီလာ့တကိုယျ လုံးနှေးထှေးသှားစသေောအနမျးတို့ ကိုခံစားရလိုကျသညျ၊ နှုတျခမျးမှတဆငျ့လညျတိုငျအထိစုပျနမျးလရော တကိုယျလုံးအကွောတို့တဖိနျးဖိနျး တရှိနျးရှိနျးဖွဈလာကာပါးနှငျ့နားပူ နှေးလာ သကဲ့သို့ကာမစိတျတို့ပါထ ကွှလာခဲ့သညျကိုနီလာသိလိုကျ ရတော့သညျ။အကငြ်္ီကိုမတငျပွီးဘရာကိုပငျ့တငျသှားသညျ့ဂြော့ကို လညျးမတားမိတော့ပေ။ဂြော့အလိုကနြခေငျြနမေိသညျ။ဂြော့လီးက လညျးမိမိပေါငျခွံကိုလာထိနေ သညျလေ။မိမိနို့ကို တပွှတျပွှတျစို့ ရငျးပေါငျတံတလြောကျပှတျ ပေးနသေညျ့အခါအထိအတှေ့၌ သာယာလာပွီးလူကအလိုလိုညညျးမိတော့သညျ။ “အငျးးဟငျးးးဟငျးး” နို့ကိုနာကငျြအောငျမစို့ပဲလြှာဖြားနှငျ့ သာစို့ပေးသဖွငျ့ကာမစိတျတို့တိုး လကျြလာခဲ့သညျ။ထို့အပွငျနီလာ တငျသားမြားကိုဖွဈညှဈပွီးလုပျနသေဖွငျ့နီလာ့ပိပိမှအရညျတို့စိုစှတျ လာခဲ့ရပွနျသညျ။ဂြော့က နီလာ့အဝတျနှငျ့အတှငျးခံကိုပါဆှဲ ခြှတျရာနီလာလညျးခါးအောကျပိုငျး ကွှပေးလိုကျသညျ။အောကျပိုငျး ၌အဝတျတို့ကငျးမဲ့လသေညျ။ပေါငျ ကွားထဲ လကျရောကျလာသဖွငျ့ နီလာလညျးပေါငျကိုဟပေးလိုကျ သညျ။အကှဲကွောငျးတလြှောကျ ဂြော့လကျတို့စုံဆနျပှတျခသြေညျ။လူ လညျးရငျခုနျသလိုဖွဈလာကာတကိုယျလုံးလထေဲရောကျ နသေလိုမောပနျးလာသလိုဖွဈပွီး အာခါငျတို့ခွောကျလာသညျ။ထိုအ ရာသညျပငျရငျခုနျခွငျးလား၊ကာမ စိတျတို့ဖွဈခွငျးလားကွညျပွာ ခှဲခွမျးစိတျဖွာဖို့ရာအခြိနျမရပေ။
ညညျးမိလကျြသာနမေိသညျ။ ဂြော့ကနီလာ့ဆီးခုံနားမကျြနှာအပျ လိုကျသောအခါနီလာ့စိတျတို့ လထေဲလှငျ့မွောသလိုခံစားရပွီး ပေါငျကိုကားလကျြမွှောကျပငျ့ပေး မိသညျ။အကှဲကွောငျးတလြောကျ စုံဆနျလူးရငျးယကျပေးလာသော ဂြော့ လြှာဖြား၌အသိစိတျကိုလကျ မွှောကျအရှုံးပေးသကဲ့သို့သာစိတျကိုလှတျလိုကျတော့သညျ။ပူနှေးစို စှတျသောလြှာဖြားကပိပိ အတှငျး သားတလြောကျထိုးမှပွေီးအစကေို့ ထိုးကလျောလရော “အားးရှီးး ရှီးးအားးဂြော့” အောကျပိုငျး၌ဂြော့ကဖိထား၍ အပျေါပိုငျးကွှတကျပွီးလကျနှဈဖကျနဲ့ဂြော့ခေါငျးကိုဖိထားမိလိုကျသညျ။ကာမခုလုတျချေါသောကာမဖူးကို စုပျခံလိုကျရသညျဖွဈ ရာကာမစိတျတို့အလြှံတညီးညီးထကာပိပိထဲမှ အရညျမြားစီးထှကျစလေိုကျသညျ။ ဒီနလေု့ပျခွငျးသညျနီလာ၏ဒုတိယ အထိအတှဖွေ့ဈသဖွငျ့မနညေ့ ကထကျပိုကောငျးနသေညျ။အဖုတျထဲလကျနဲ့ကလျောပွီးအစကေို့တ ပွှတျပွှတျစုပျရာနီလာ့တ ကိုယျလုံးထှနျ့ထှနျ့လူးစရေပွနျသညျ။ “အားးရှီးးရှီးးးး တျောပွီအားးး” နီလာညညျးရငျးပငျတဈခြီပွီ သှားစသေညျ။မွောကျတကျ လာသောခန်ဓာကိုယျမှာပွနျပွီးပွုတျကြ လာသညျ။လူလဲညညျးရသဖွငျ့အလှနျပငျမောဟိုကျ၍နရေတော့သညျ။
“နီလာ ပွီးသှားသလား” “အငျး “ “ငါလုပျတာကောငျးရဲ့လား” “နငျကဆရာကွီးပဲ” “ဟားးဟားးးး” ဂြော့အဝတျတို့ခြှတျလပွေီ။လီး ရမျးရမျးနဲ့အမောဖွနေသေော နီလာ့အနားကပျအိပျရာနီလာက အမောဖွရေငျရငျးဂြှောလီးကိုဂှငျးတိုကျပေးသညျ။ထိုနောကျ တော့ နီလာလညျးတတျသမြှမှတျသမြှသောပညာနဲ့ဂြော့လီးကိုငုံစုပျ တော့သညျ။အာငှကွေ့ောငျ့လား နီလာမသိခြေ။ဂြော့လီးကအရမျး ပငျကွီးလာသညျ။ထိပျဖူးဝ၌အရညျတို့စိမျ့ထှကျလာသညျ၊ငံပွပွအ ရညျဖွဈသျောအနံ့နှငျ့အရသာတို့မဆိုးတောကွောငျ့နီလာစုပျရ တာအဆငျပွသေညျ။ထှကျလာသောအရညျတို့ကိုလညျးပါးစပျထဲငုံမထား ပဲမွိုခရြငျးစုပျလိုကျသညျ။ထို့အပွငျ ဂြော့၏ဂှေးဥကွီး ကိုလညျးအသာ အယာညှဈပေးလိုကျသညျ။ဂြော့၏ဂှေးဥမှာပြော့တှဲမနဘေဲ၊ကဈြ လဈနသေညျ။သငျပေးခွငျးမဟုတျပဲဂှေးဥကိုပါ နမျးပေးလိုကျသညျ။ ဂြော့လီးကားအလှနျမာတောငျကာမိုးပျေါသို့ပွနျတကျမညျသကှဲသို့ဖွဈ လာသညျ။ထိပျဖူးကွီးလဲနီရဲလို့လာ သညျ။စုပျရသညျကိုကနြေပျလို့နမေိ သညျ။မကျြလုံးမှိတျပွီးတအငျးအငျး ညညျးနသေောဂြော့ကို “တျောပွီဂြော့အာညောငျးနပွေီ” “အာညောငျးရငျရပျလိုကျလေ၊ငါ လဲအရမျးလုပျခငျြနပွေီ” “အငျးလုပျလေ” နီလာပကျလကျလှနျပွီးအိပျလိုကျ သညျ။ကနြျောကနီ လာ့ပေါငျကွားဒူးထောကျဝငျပွီးသူ့လီးကွီးနဲ့ နီလာ့ပိပိကိုအထကျအောကျစုံဆနျလုပျပွနျသညျ။ကငျြတကျသှား သောခံစားခကျြနဲ့ အညီနီလာညညျးလိုကျသညျ။ထိုနောကျဂြော့ကနီလာ့အဖုတျဝကိုလီးတပွေီ့း တဖွေးဖွေးသှငျးလိုကျတော့သညျ။
“ဖဈြ ဗဈြ ဖဈြ …” “အာ့ အငျးးဟငျးးဟငျးး” လီးကနီလာ့အဖုတျဖဲတိုးဝငျ သှားသညျ။အရညျတို့စိုရှဲနေ၍သာ တအိအိနဲ့ဝငျသှားသညျ။ လီးအ ထဲရောကျသညျ့အထိအတှသေ့ညျလညျးအဖုတျနံရဲသားမြားကိုပှတျ သှားလရောအရသာရှိနသေလိုခံစား လိုကျရပွီးနီလာ ညညျးမိတော့သညျ။ကနြျောလညျးနီလာ့ပုခုံးသားကိုဆှဲ ပွီလီးကိုရှတေို့းနောကျဆုတျလုပျပေးလိုကျတော့တယျ “ဗဈြ ဘှတျ ဖှတျ ဖှတျ” တတိယအကွိမျလိုးခွငျးဖွဈသျောလညျးတဖွေးဖွေးခငျြး သာအသှငျးအထုတျလုပျရသညျ ။စေးပိုငျတငျးကပျြမှု့ကိုအပွညျ့အ ဝရရှိပွီးနီလာ၏လှမျးဖကျခွငျးကိုခံ ရကာလကျသညျးအခြို့က ကြောပွငျကိုလာပွီးမထိတထိနဲ့ ထောကျနတေဲ့အခါစိတျတို့ပိုကွှလာ ပွီးခါးကိုမတျ၍အရှိနျတငျပွီးတဖှတျဖှတျတဖနျးဖနျးမွညျအောငျလိုး လိုကျတယျ “ဘှတျဖှတျ ဖှတျ ဖှတျ” “အာ့အငျးးဟငျးးဟငျး” .အစနှေ့ငျ့ထိတှမှေု့ဘေးနှုတျခမျး သားမြားနဲ့ပှတျတိုကျမှု့တှကွေောငျ့ မှာခံစားဖူးပမေယျ့နောကျထပျပေါငျးမြားစှာလိုခငျြနသေော အရသာတ မြိုးကိုခံစားရပွီးညညျးမိတယျ။
တခကျြတခကျြ ဆောငျ့ခကျြတှကွေောငျ့အရသာအရမျးရှိပွီးနီလာမှာတုနျတကျလာခဲ့တယျ။ “ဖှတျ ဘှတျ ဖနျး ဖနျးဖနျး” “အာ့ !အိုးး ရှီးးရှီးးးအိုးး” ကာမစိတျတို့အထှဋျအထိပျရောကျ လာပွီးညညျးသံပိုထှကျခဲ့တယျ။ ပိပိအတှငျးနံရံတှကေနကေဂြော့လီးကိုအရမျး ညှဈသလိုလဲခံစားရ လာတယျ။ ဂြော့ကနီလာမှာတတိယအ ကွိမျဖွဈပွီးပွီးမညျ့အခြိနျမှာကွာ မညျမှနျးသိနသေညျ့အတှကျပငျ မနားတမျးဆောငျ့လိုကျသေးသညျ။ ထိုနောကျတော့ဂြော့ကနီလာ့ ခါးကိုကိုငျ၍ပငျလီးကိုမခြှတျပဲမ လိုကျကာပကျလကျလှနျလှဲခြ လိုကျရာနီလာမှာအလိုအလြောကျ ဂြော့အပျေါရောကျသှားသညျ။ “ဟကောငျရာငါကအပျေါကလုပျရ မှာလား” “တဈခါတလေ စုံ အောငျလုပျကွညျ့ စမျးပါဟာ” နီလာသိလိုကျပါပွီဂြော့ကမိမိကိုအပျေါစီးကနလေုပျခိုငျးမှနျးသိ တာကွောငျ့ခွထေောကျတှပေုံမှနျ အနအေထားရောကျစရေနျပွုပွငျ လိုကျပွီးရှတေို့းနောကျဆုတျလုပျ ပေးလိုကျသညျ။ငါးမိနဈခနျ့လုပျပေး ပွီးနောကျမှဂြော့ကနီလာ့ ခါးကိုကိုငျပွီးကွှခိုငျးလာတာကွောငျ့ နီလာအပျေါစီးကနပွေီးဆောငျ့ခြ ပေးလိုကျသညျ။မိမိလိုအပျသော အနအေထားအထိ အသှငျးအထုတျလုပျနိုငျရနျဂြော့ရငျဘတျကိုလကျ ထောကျကာအားယူပွီးတခကျြခငျြး ဆောငျ့ပေးလိုကျသညျ။လီးကပိပိထဲတိုးဝငျ လာသလိုမိမိစိတျကွိုကျထိစခေငျြတဲ့နရောကိုထိနျးပွီးလုပျနိုငျသဖွငျ့နီလာသဘောကသြှား သညျ။ကောငျးလှနျးသဖွငျ့အျောသံ ပို ထှကျတော့သညျ။အသားခငျြးထိသံတဖတျတဖတျနှငျ့လီးဝငျသံတဇှိဇှိ၊တဗြိဗြိပငျမွညျနတေော့သညျ။မညျသို့ပငျကောငျးစကောမူ အလအေ့ ကငျြ့မရှိသောနီလာ့အတှကျ ကွာကွာလုပျနိုငျရနျမလှယျမော ဟိုကျလာသဖွငျ့ “ဂြော့ငါအရမျးညောငျးနပွေီဟ” “အေး အာ့ဆိုကုနျးပေးပေါ့” “ဟငျ..နငျနှျောဇျောမိုးသိပျအသားယူလှနျးနပွေီ” “အကှကျစုံမှအရသာပိုသိတာဟ” “မသာ…လိပျမြိုးလုပျရငျ လဲမွနျမွနျ လုပျကြိမျးစပျနပွေီ” ဂြော့ကိုစိတျဆိုးနသေလိုပွော လိုကျပမေယျ့နီလာကတော့ဂြော့အလိုကအြိပျရာပျေါလေးဘကျ ထောကျပွီးကုနျးပေးလိုကျသညျ၊
ကနြျောလညျးသူလုပျခငျြတဲ့ပုံစံကို နီလာကခှငျ့ပွုလိုကျတဲ့အတှကျအိပျရာကထလာကာနီလာ့ နောကျမှာမတျတပျရပျပွီးဖငျကို ကွညျ့လိုကျသညျ၊ကိတျလှနျးတဲ့ နီလာ့ဖငျကွီးဟာဝိုငျးစကျလှပ ပွီးခါးကဉျြကဉျြကလေးကွောငျ့ပို ပွီးဆှဲဆောငျမှု့ရှိနတေော့ တယျ။တငျသားကိုလကျဖဝါးဖွငျ့တခကျြနှဈ ခကျြရိုကျခငျြစိတျလညျးပေါကျလာသဖွငျ့ရိုကျထညျ့လိုကျတယျ။ “ဖတျ ဖတျ.” “အာ့ အိုး မသာနာတယျဟ” ဖွူဖှေးလှသောနီလာ့တငျသား မှာနီရဲသှားတော့တယျ။ “ဒီလောကျလှတာကှာရိုကျယုံတငျမကဘူးကိုကျပဈ ခငျြတာ” “နငျကတကယျနှာဘူးကွီး” “နှာဘူးမို့နငျ့ကိုဘုနတောပေါ့ဟာ” “လုပျမှာဖွငျ့မွနျမွနျလုပျငါလဲတနျး လနျးကွီးပဲ” “အေးပါ ဟ”ဂြော့ကလီးကလီးကိုကိုငျပွီးအ ဖုတျထဲထညျ့လိုကျသညျ။ ဖဈြ ဗဈြ ဖဈြ …” “အာ့! အငျးးဟငျးးဟငျးး” ကုနျးပွီးခံရတဲ့အရသာ ကတမြိုးပါ အစကတော့အောငျ့သလိုဖွဈပွီးအထဲထိလီးကမွုတျဝငျသှားခြိနျမှာ တော့အဆုံးထိထိထိရောကျရောကျ ဝငျသှားတဲ့ခံ စားမှု့မြိုးကိုနီလာ ခံစားလိုကျရသညျ။
“ဘှတျ ဖှတျ ဖတျ ဖတျဖနျးဖနျးးး” “အာ့!အငျ့! အငျ! အငျးဟငျးး” ဂြော့ဆောငျ့ခကျြကွောငျ့နီလာမှာနာသလိုအောငျ့သလိုလိုနဲ့ ကောငျးသလိုလိုဖွဈလာတယျ၊ဂြော့ကနီလာ့တငျသားနှဈခွမျးကိုဖွဲကိုငျ ပွီးဆောငျ့ခကျြပွငျးပွငျးနဲ့လိုးလေ နီလာမှာအျောညညျးမိ လေ၊တ ဖွေးဖွေးနဲ့နီလာမှာကာမစိတျ အထှဋျအထိပျထိရောကျလာတယျ။ ဂြော့အတတျကောငျးတှတေတျ တယျ။နီလာ့ဖငျစအိုဝ ကိုလကျသညျးနှငျ့ထိသလိုမထိသလိုလုပျတော့နီလာမှာစိတျတှပေိုထလာပွီး ဘှတျ ဖှတျ ဖတျ ဖတျဖနျးဖနျးးး” “အာ့!အငျ့! အငျ! အငျးဟငျးးဂြော့ လုပျ လုပျ ငါ ငါပွီးတော့မယျ အငျ့” ဂြော့လညျးကွာကွာမထိနျးနိုငျ တော့ခြေ။အရမျးလှပတဲ့ဖငျကွီးကို အားရပါးရဆောငျ့ရတဲ့အရသာက အလှနျပငျကောငျးလာကာပွီးခါနီး လာပွီးနီလာနှငျ့ပွိုငျတူပွီးနိုငျ ရနျစိတျနှဈပွီးမွနျမွနျပငျလိုး လိုကျ ရာနီလာရဲ့အျောညညျးသံနှငျ့ ပိုထှကျလာတယျ “ဘှတျဖတျ ဖတျ ဖနျးဖနျး” “အိုးးရှီးးအိုးး ရှီး အား ငါပွီးတော့ မယျ အားး” “ဘှတျ..ဖတျ ဖတျ ဖနျးဖနျး”” “ဟုတျ အာ့ ရှီးးရှီးးးအားးပွီးးပွီအား” နီလာတဈယောကျအသညျးအ သနျအျောလာပွီးနောကျငွိမျ ကသြှားရတယျ။ကနြျောလညျးနီလာမှောကျ၍လဲကမြသှားစရေနျခါးကို ကိုငျကာထိနျးထားနောကျအ ကွိမျနှဈဆယျခနျ့ဆကျတိုကျ တှနျး လိုး လိုးလိုကျရာသုတျမြားတဖွော ဖွောနဲ့ကှနျဒှနျထဲထှကျသှားရတော့တယျ။
“ဟားးကောငျးလိုကျတာနီလာ ရာလူလညျးခြှေးတှနေဲ့နဈရောပဲ”“အငျးလေ နငျအလကားရတယျဆိုပွီးအသေ ကွိတျနတောကိုး” “နငျကသာအသကွေိတျတယျပွော နတောငါကအားကိုမရသေးဘူး” “ဒီလောကျလုပျနတောဘာလို့အားမရတာလဲ” “အလှာပါး ပမေယျ့တဈကမ်ဘာခွား သလိုခံစားရတာဒငျးကွောငျ့အားမ ရတာ” ကှနျဒှနျကိုလကျညှိုးထိုးညှနျပွပွီး ပွောသောကွောငျ့ “ဒငျးရှိလို့ ငါအလုပျခံတာ၊ဒငျးမရှိရငျ နငျလဲပွနျဘဲ” “အေးပါကှာအေးပါ” “ရုံးသှားရမှာနောကျကနြပွေီရခြေိုး နငျလဲအလုပျသှားရမှာ မဟုတျလား” “အေး ရခြေိုးတော့” “အေးပါဟာ” ” ငါအရငျရခြေိုးခနျးဝငျအုံးမယျ” “အတူတူးခြိုးရအောငျ” “ကွာသှားမယျဟ” နီလာကပွောပွောဆိုဆိုနဲ့ထသှားရာ ကနြျောကုတငျပျေါထိုငျ၍ကနျြခဲ့ လိုကျသညျ။သူရခြေိုးပွီးအလှပွငျတုနျးကနြျောရခြေိုးလိုကျ တယျ။ ပွီးတော့သူ့ကိုရုံးကိုလိုကျပို့ပွီး ကနြျောလဲအလုပျကိုသှားလိုကျ တယျ။နလေ့ညျရောကျတော့နီလာ့ဆီကဖုနျးဝငျလာပွီး “င ဂြော့ငါ့ကိစ်စအဆငျပွသှေားပွီ” “အာ ငါကအဆငျမပွစေခေငျြသေး ဘူး”
“လူယုတျမာကွီးကွညျ့စမျး” “ဟီးးတကယျပွောတာဟ” “ငါ့လိ၊ငါဒီနပွေ့နျမယျ” “အမျ ဘယျအခြိနျလဲ” “ညနငေါးနာရီ “အေးငါ လာခဲ့မယျ” ကနြျောလဲခကျြခငျြးထှကျလာပွီးသူ့ရှာအတှကျလကျဆောငျတှဝေယျ လိုကျသညျ။ထိုနောကျသူ့ဆီရောကျ သှားတော့သူ က အိပျနသေညျ။ တံခါးခေါကျမှနိုး၍တံခါးလာဖှငျ့ သညျ။ “နငျဘာလို့ကွာနတောလဲ” “ရှာအတှကျလကျဆောငျဝယျနလေို့” “အော ၊ဘယျမှာလဲ” “ကားပျေါထားခဲ့တာ” “ငါလဲနငျ့ကိုစောငျ့ရငျးအိပျပြျောသှား တာ” “အငျးနငျလဲပငျပနျးနပွေီပဲ” “အငျးလေ နုံး ခြိနတောဟ၊ပွီးတော့ နညျးနညျးအောငျ့နတော” “အာဘှားထပျပေးရမလား” “တျောပွီငါမခံနိုငျတော့ဘူး” “ဟားးဟားး” “ရယျမ နနေဲ့၊ပွီးတော့ရှာလာရငျ အေးဆေးနေ” “အေးပါဟာ” “ခနလောကျနားပါရစဦေး” “အေးနားနား” “ညနလေေးနာရီဆိုထှကျမယျ” “အငျးအခုနှဈနာရီခှဲပဲရှိသေးတာ နငျလဲအိပျဦး” “ဆကျမလုပျနဲ့တော့” “အေးပါဟာ” နှဈယောကျသားအိပျရာပျေါလှဲပွီး အိပျလိုကျ ကွတယျ။ကနြျောလဲသူ့ ကိုဖကျထားလိုကျပွီးနောကျလုံခညျြ ထဲလကျနှိုကျ၍ ပိပိကိုကိုငျလိုကျရာ “မသာရေ ရတဲ့အခြိနျမှာတောငျ ကိုငျလိုကျသေးတယျ” “ကွိုကျတာကိုးဟ” “လုပျမနနေဲ့ ငါနာနပွေီ” “အေးပါဟာ” နီလာလကျစဖွတျထားမှဖွဈတော့ မညျ။ယခု လိုဂြော့နဲ့လငျမယားလိုနခေဲ့တာကနြေပျပါသညျ။ဂြော့ကိုငယျ သူငယျခငျြးသံယောဇဉျနဲ့ခဈြလညျး ခဈြသညျ။ဂြော့ကိုခဈြခွငျးသညျ ပိုငျဆိုငျလိုခွငျးမရှိပေ။ယခုလိုမြိုးဖွဈသှားလိမျ့မညျဟုနီလာမထငျမှတျမိပေ။
သို့သျောဖွဈသှားခဲ့သညျ။ဂြော့အားပေးဆပျလိုကျသျောလညျးနောငျတလညျးရမိမညျမဟုတျပေ။နောငျ ရနျကုနျကိုလာလြှငျတော့ ဂြော့နှငျ့ တှနေို့ငျသညျ။ဂြော့ကိုဆကျ၍လညျးခဈြနိုငျသညျလေ။ဂြော့ကိုထားခဲ့ လညျးသျောလညျးလှမျးနရေမညျမဟုတျပေ။ညနေ လေးနာရီထိုးတော့ဟိုတယျမှထှကျသညျ။ကားဂိတျ ကိုရောကျပွီးကားထှကျမှဂြော့ကို ပွနျခိုငျးလိုကျသညျ။ဂြော့ပွနျသှား တော့နီ လာ့ရငျထဲဟာ၍ကနျြခဲ့ရ သညျ။တခုတော့နားလညျမိသညျ။ ခှဲခှာခွငျးဆိုသညျမှာခနျြခဲ့သူလညျး လှမျးရသလိုကနျြခဲ့သူလညျးလှမျး လို့ကနျြခဲ့ပမေညျ။
နီလာတစ်ယောက်အလုပ်ကိစ္စနှင့် ရန်ကုန်ကိုရောက်လာသည်။မနေ့ညနေကကားစီးမနက်ရန်ကုန်ရောက်တော့တစ်ဦးတည်း ယောင်ချာချာဖြစ် နေတော့ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ဂျော့ကိုသတိရလိုက်သည်။ဂျော့ဆိုတာကငယ်ငယ်ကတည်းကအတူ စားအတူ ကစားနေခဲ့တဲ့အကောင် တရပ်ကွက်လုံးမှာမိန်းကလေးတွေ ချည်းမွေးထားကြတဲ့ကြားကသူ တစ်ယောက်တည်းပဲယောက်ျား လေးပါတော့သူငယ်ချင်းအားလုံးရဲ့ကစားဖော်ယောက်ျားလေး။မိသားစုထဲမှာသားအကြီးမြေးအကြီးဝိုင်း ချစ်ကြတဲ့အကောင်၊ ရပ်ကွက်ကလဲ ချစ်ကြတယ်။တမျိုးလုံးသည်းသည်းလှုပ်တော့မုန်းဖို့ကောင်းပေမယ့် လူကလူဆိုးတော့မဖြစ်ဘူး။ခင်စရာ အရမ်း ကောင်းတယ်။ဒီကောင်ကို ခေါ်ပြီးနှိပ်စက်မယ်တွေးကာဖုန်း ဆက်လိုက်တယ်။
မနက်အလုပ်သွားခါနီးဖုန်းဝင်လာ တော့ကျနော်မသိတဲ့နံပါတ်တစ်ခုပါ ပဲ။ဒါပေမယ့်ကျနော်ကိုင်ပြီးထူး လိုက်တယ်။ “ဟလို” “ဟဲ့ ငဂျာ့ငါပါ၊နီလာလေ” “အေး မခေါ်စဖူးအခေါ်ထူးလို့ဘာ များလဲလင်ရလို့ဖိတ်စာပေးပို့မလို့ လား” “လဖွတ် ဒါပဲခုလုတ် တိုက်နေတာပဲ၊ လင်မယူတော့ဘူး၊မိန်းမပဲယူတော့ မယ်” “မိုက်တယ်နင့်ကိုယူရင်နောက်တစ် ယောက်ပါထပ်ရမယ်” “မသာ ဒါပဲစဉ်းစားနေတာပဲ” “ဟားးး၊ကဲပြော” “ငါရန်ကုန်ရောက်နေတယ်ဟ” “ဟုတ်လား၊ဘယ်မှာတည်းလဲ” “ဟိုတယ်မှာပေါ့ဟယ်” “ရန်ကုန်ရောက်တာများငါ့အိမ်မ လာဘူး” “မလာရဲပါဘူး၊နင့်အမေကိုကြောက် လို့” “ကြောက်စရာမလိုပါဘူးဟာ၊ငါတို့ အသက်လည်းသုံးဆယ်ပဲကျော်နေ ပြီ” “မသိဘူးဟာ၊ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြောက်ရတာဆိုတော့၊သိတယ်မ လားသူ့သားတွေ ကိုရွာသူနှင့်ညားမှာ စိုးလို့” “အဲဒါငယ်ငယ်တုန်းကပါဟာ၊အခု တော့သူ့မှာကူဖော်လောင်ဖက်မရှိ လို့စိတ်ညစ်နေရတာ” “ဟုတ်လား..နောက်မှအန်တီကိုလာတွေ့မယ်ဟာ”
“အေးပါ၊နင်ဘာကိစ္စနဲ့ရန်ကုန်လာ တာလဲ” “အလုပ်အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စပါဟာ၊အခုငါမသွားတတ်လို့၊လမ်းညွှန် ပေးဦး” “ငါလာခေါ် မယ်ဟ”“နင့်လိုအလုပ်များတဲ့လူမခေါ်ရဲပါ ဘူး” “နင်ကလဲစကားနာထိုးဖို့ပဲသိတယ်” “မဟုတ်လားနင်ကဘောစိပဲကို” “မသာမ လိ့ဘောစိ၊ငါလာခဲ့မယ်” “အားမှလာ” “အေးအခုလာမယ်” တကယ်တမ်းကနီလာနှင့်ကျနော်ကငယ်သူငယ်ချင်း၊ရှစ်တန်း အထိအတူ ကျောင်းတက်ဖက်၊ဒါပေမယ့်နီလာကကျနော့်ထက်အသက်တနှစ်ကျော် ကြီးတယ်။စာမေးပွဲတနှစ်ကျလို့အတန်းတူခဲ့ တာ။ရှစ်တန်းအထိအတူတူဆော့ခဲ့ကြတာ။ငယ်တုန်းကဆို ရင်လင်မယားလုပ်တမ်းတောင်က စားခဲ့သေး။သူတို့ကအကြီးတွေ ဆို တော့သူတို့ကဆရာမကြီးပေါ့ဗျာ။ရှစ်တန်းရောက်လာတော့ကျနော့အမေကနီလာတို့ အပျိုဖြစ်လာပြီသားသူတို့နှင့် မဆော့ရတော့ ဘူးဆိုလို့သာကျနော် ကျနော်ကခပ်တန်းတန်းဖြစ်သွားခဲ့တာဗျ။ဒီလိုခပ်တန်းတန်းနေတော့ နီလာကမေးတယ် “ဟေ့ကောင် နင်ငါ တို့နဲ့လာမကစား ပါလား” “အမေကနင့်ကိုအပျိုဖြစ်နေပြီလို့ ပြောတယ်၊ငါကြောက်လို့ဟ” “ဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲ” “ငါလဲမ သိဘူး၊အပျိုဖြစ်တယ်ဆို တာဘာလဲမသိဘူး” “နို့ကြီးလာတာကိုပြောတာဖြစ်မှာ” “ငါကြည့်တာမတွေ့ပါဘူး၊အရင်လိုပါပဲ” “အရင် လိုမဟုတ်တော့ဘူးကြီးလာ ပြီ”
“မယုံပါဘူးပြကြည့်” “ဒီမှာလေ ငါ့နို့ကြီးလာပြီ” နီလာကနို့စူစူလေးကိုပြလေသည်။ ကျနော်လဲအင်္ကျီကိုလှန်လိုက်ပြီး “ငါလဲစူန တောလားမသိဘူး” “အေး နင်လဲစူနေတာပဲ” “နင့်ဟာကိုင်ကြည့်မယ်ဟာ၊နင်လဲငါ့ ဟာကိုင်ကြည့်” ကျနော်ပြောရင်းနီလာ့နို့ကို ကိုင်လိုက်သည်။ “နာတယ်ဟ ဖြေးဖြေးကိုင်” “ကိုင်လို့မရသေးဘူးနီလာ၊နို့ကဒီ ထက်ပိုကြီးမှကိုင်တော့မယ်” “မသာကောင်၊ နှာဘူး” ထိုသို့ပင်ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့ကြ လေရာ၊အခုတော့သူကအလယ် တန်းပြဆရာမပင်ဖြစ်နေလေပြီ။ ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ် သည့်အတွက် ကျနော်ချက်ချင်းပင်နီလာဆီကို သွားလိုက်သည်။ထိုနောက်နီလာကို ခေါ်ပြီးရွှေပုဇွန်မှာမနက်စာစားရန် ခေါ်လာ ခဲ့လိုက်သည်။မိန်းကလေး တို့ရဲ့ထုံးစံအသက်သုံးဆယ်အရွယ် တင်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးနှင့်အလှသွေး ကြွယ်တတ်ကြသည် ဖြစ်၍နီလာ သည်လည်းခေတ်စကားအရကိတ် သည်ဟုပြောရပေမည်။တင်ထွားပြီး နှင့်ရင်သားကြီးသည်။သို့သော်အပျိုဖြစ်၍ခါး တုတ်ခြင်းမရှိခါးသေး သည်။
“နီလာ နင်တော်တော်လှလာတယ်ဟ” “ငါကျွေးမယ်လေ” “ဘာကျွေးမှာလဲ” “မနက်စာပြောတာ” “ငါကညစာစားချင်တာ” “မသာကောင်ခုထိနှာဘူးထနေတုန်း” “ငါကဂန်ဒူးမှမဟုတ်တာ၊ငါကနှာဘူး လေ ဟားးးဟားး” “မသာကောင်သူများကိုပြောရရင် ဒီလိုပဲ” “ကဲပါ ဘာစားမလဲငါမှာလိုက်မယ်” “အေး ရွှေပုဇွန်ပြင်ထားတာလှတယ် နှော်” “အင်းလှတယ်” “အပြန်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေး ဟာ” “အေးရိုက်ပေးမယ်” စားသောက်ပြီးအပြန်တွင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ရန်အတွက် “ဟေ့ နင့်ဖုန်းပေး” နီလာကlockချထားတာကို ဖြေ၍ ပေးလေသည်။ကျနော်လဲဖုန်းယူ၍ သူ့အားဓာတ်ပုံရိုက်ပေးလိုက်၊ပြန် ကြည့်လိုက်နှင့် ရေကန်ဘေးတွင် ရိုက်ပေးလိုက် သည်။“ဟေ့ငါ Toiletသွားချင်တယ်” “သွားလေ ဟိုဘက်မှာဝင်သွားလိုက်” သူToiletသို့ဝင်သွားစဉ်သူ့ဓာတ်ပုံ များကိုကြည့်နေ လိုက်ပြီး သူ့ရဲ့Fbအကောင့်ကိုကြည့်စဉ် Fb အကောင့်ကသူ့အမည်မဟုတ်၊
အကောင့်အမည်က လမင်းချို၊ထို အကောင့်ကိုမြင်ဖူးသည်ကိုစဉ်းစား ပြီးကျနော့်၏fake အကောင့်တွင် သူငယ်ချင်းဖြစ်နေပြီး ကား ပြောဖူး သည်ကိုသတိရလိုက်သည်။အပျို ကြီးလိင်ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားမှန်းတွေးမိပြီးနီလာရောက်လာရာသူ့ ဖုန်းကိုပြန်ပေးလိုက် သည်။“ကဲနီလာနင်သွားရမယ့်ရုံးကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်” “အေးလေ သွားကြစို့” သူ့ကိုရုံးကိုပို့ပြီးပြန်လာခဲ့သည်။ ညနေထမင်းစားအတူ စားဖို့ပြော လိုက်သည်။ နေ့လည်ကျတော့ကျနော်လဲfbခန ဖွင့်ကြည့်ရာလမင်းချိုအကောင့်မှ ရန်ကုန်ရောက်နေသည်ဟုတင်ထား ပြီးမီးစိမ်းနေသဖြင့် Hiလိုက်သည်။ “Hi “ သူပြန်ပြီးhi လေသည်။ “ရန်ကုန်ရောက်နေတယ်ဆို” “ဟုတ်” “တစ်ယောက်တည်းလား” “ဟုတ်တစ်ယောက်တည်း” “ခုဘယ်မှာ” “ဟိုတယ်မှာပဲ” “ပျင်းနေမှာပေါ့” “ပျင်းလဲဘာမှလုပ်လို့မှမရတာ” “အဖော်လာ လုပ်ရမလား” “ဟင့်အင်းရတယ်၊ဘော်ဒါလာလိမ့်မယ်”
“ဘောဒါကယောက်ျားလေးလား” “ဟုတ်တယ်ငယ်သူငယ်ချင်း” “အင်း ရင်ခုန်တယ်မလား” “ဟင့်အင်း ခုန်ပါဘူး၊သူငယ်ချင်းအ ချင်းချင်းကို” “ဟုတ်လား ““ဟုတ်” ကျနော်လည်းအလုပ်ဆက်လုပ်ပြီး စောစောပြန်ဖို့စီစဉ်ပြီးညနေနီလာ့ဆီဖုန်းဆက်လိုက်သည်၊ “နင်ထမင်းမစားရသေးဘူးမဟုတ် လား” “အင်းမစားရသေးဘူး၊နင့်ကို စောင့်နေတာ” “ငါလာခဲ့မယ်” “အေးအေး” ဟိုတယ် ရောက်တော့“ငါရောက်ပြီနီလာ” “မြန်လိုက်တာ” “အေးလေအလုပ်ထဲကတန်းလာ တာပဲ” “ငါတောင်ရေမချိုးရသေးဘူး” “ဟုတ်လား ငါတက်လာခဲ့မယ်” “အေးအေး” မနက်ပိုင်းကတည်းကအခန်းနံပါတ် သိထားသဖြင့်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းအားမေးရာ လမ်းညွှန်သဖြင့်နီလာ့အခန်း ဆီရောက်ပြီးတံခါးခေါက်လိုက် သည်။နီလာတံခါးလာဖွင့်ပြီး “ထိုင်လေ ၊ငါရေချိုးဦးမယ်” “ချိုးလေ၊ငါ လဲနင့်နဲ့အတူတူချိုးမယ်”မသာကောင်”“ဟားးး” သူရေချိုးခန်းဝင်သွားသဖြင့်ထိုင် စောင့်ပေးလိုက်ပြီးရေချိုးခန်းကသူ ထွက်လာ တော့ကျနော်လဲရေဝင်ချိုး ပြီးလမ်းမှဝယ်လာသောအဝတ်အ စားကိုဝတ်လိုက်သည်။နီလာကအလှပြင်နေတုန်းပါ။
“ပြီးသေးဘူးလားဟ” “ပြီးတော့မှာပါ” “အေးပါလုပ်လုပ်၊နင့်နဲ့ငါဟိုတယ် ထဲမှာနှစ်ယောက်တည်း” “နင်ကဘာလုပ်ချင်လို့လဲမသာ” “ချောကလက်မှိုတက်ကိုစားရ ကောင်းမလားတွေးနေတာ” “မသာ နင်ပဲစီးကရက်မှိုတက်” “ငါကမှိုမတက်ဘူး၊ပြောင်းတိုက် နေ က်” “ဟမ်မသာကောင်နားရှက်စရာတွေ” “အမယ် ခုမှနင်ကနားရှက်စရာဟုတ် လား၊လမင်းချိုရဲ့” “အယ်မသာ ငါ့အကောင့်ကို ကြည့် ထားတယ်ပေါ့” “ဟားးးဟားး” “ဟီးရှက်လိုက်တာဟာ”“ရှက်မနေပါနဲ့ဟာလူတိုင်းနီးနီးfake အကောင့်သုံးကြတာပဲ” “ဟု တယ်ငါလဲစိတ်ထွက်ပေါက် အနေနဲ့သုံးတာ” “ဟီးးငါသိပါတယ်ဟာ” “နင်ဘယ်သူ့မှမပြောနဲ့နှော်” “မပြောပါဘူးနီလာရယ်” “နင်fakeထဲမှာဘယ်သူတွေနဲ့ရင်းနီး လဲ” “ဘယ်သူရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး၊နည်း နည်းပါးပါးစကားပြောဖူးသူပဲရှိတာ”နင်သဘောကျ တဲ့သူမရှိဘူးလား” “Fakeထဲမှာဘယ်သူ့ကိုယုံရမှာလဲ” “ရှိပါတယ်ဟ” “ငါတစ်ခုပြောပြမယ်ဟ၊ဟိုလေ အပြာစာရေးတဲ့သူတစ် ယောက်ရှိ တယ်။စတိဗ်တဲ့၊သူနဲ့တော့ဆွေးနွေးဖူးတယ်”
“ဟုတ်လား” “ဘာတွေဆွေးနွေးဖူးတာလဲ” “ဝါသနာပါလို့ဒီစာမျိုးရေးတာလား၊ ပိုက်ဆံရလို့ရေးတာလားပေါ့” “အင်းဘာပြန်ပြော လဲ” “အပျင်းပြေရေးတာတဲ့” “ဟုတ်လား” “ပြီးတော့သူရေးတဲ့စာအုပ်တွေကို ဖတ်ဖူးတယ်ပေါ့၊အဖြစ်မှန်တွေလား ဘာလားပေါ့” “အင်း ဘာပြောလဲ” “အဖြစ်မှန်ပိုများပါတယ်တဲ့” “နင်အဲဒီလူကိုသဘောကျလား၊ အပြာစာအုပ်ရေးတဲ့သူပဲနှာဘူးကျပြီးမပြော ဘူးလား” “စကားပြောရတာအဆင်ပြေတယ်၊ရိုင်းတာမပြောဘူးဟ” “နင်ကဘာလို့သူ့ကိုမေးတာလဲ” “ငါသိချင်တာတွေရှိလို့ပေါ့ ” “နင်သိချင်တာအပြင်လူမေးရင်ရ သားပဲ”“အပြင်မှာဘယ်မေးရဲမလဲ၊ခုကသူ့လဲကိုယ်မမြင်ဖူးဘူး၊ကိုယ့်လဲသူ မမြင်ဖူးလို့မေးရဲတာ” “သူကနင့်ကိုသိနေရင်ဘယ်လိုလုပ်မ လဲ၊ပြီးတော့နင့်ကိုသူလာတွေ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” “အာ အပြင်မှာတွေ့စရာအကြောင်း မရှိပါ ဘူး၊ကြောက်စရာကြီး” “နင်ကဘာကိုကြောက်တာလဲ” “တော်ကြာဘုမယ်ချည်းလုပ်နေရင် ဒုကျခ ဟားးးဟားး” “ဟားးး အတွေ့အကြုံရသွားတာ ပေါ့”
“သေလိုက်ပါလား ကြောက်စရာကြီး၊ငါမေးဖူးတယ် ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံကသေ အောင်နာတယ်တဲ့” “မနာအောင်လုပ်တဲ့နည်းရှိ မှာပါ” “အေးဟဲ့ သူပြောဖူးတယ် ဟားး” “ဘယ်လိုပြောတာလဲ” “အဲဒီလိုသာ လိင်ဆက်ဆံတိုင်းနာ မယ်ဆိုရင်လင်ယူမဲ့သူရှိပါ့မ လားတဲ့” “ဟုတ်တယ်လေ” “သူကအဲဒီအပိုင်းတကယ့်ဆရာကြီး နှော် ငဂျော့” “ငါလဲဆရာကြီးပါဟ” “လိ့ဆရာကြီး faကောင်က များ” “နင်အချင်းချင်းဆိုရင်သိပ်အထင် သေးတာ”“ရှာနားမွကျရှာနှားမစားဘူးတဲ့” “အိမ်မှာလုပ်တဲ့လက်လုပ်ချဉ်က အန္တရယ်ကင်း တယ်” “အမလေးစကားတတ်တယ်၊ လိပ်မျိုး” “တကယ်ပြောတာတကယ်လို့သာ နင်အတွေ့အကြုံလိုချင်ရင်ငါ့ကို ပြော” “နင်နဲ့ဆို တော့ဆောရီး၊မျက်နှာပူစ ရာကြီး၊သူနဲ့ဆိုတော့တမျိုး ဟားး” “ငလူးမ” “ငါမေးမယ်ငဂျော့၊နင်သူနဲ့မသိဘူး လား၊သူလဲနင့်လို ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာပဲ” “ဘာလဲငါပြောပေးရမလား”“ဟေ့တော် တော်၊တွေးမိရင်တောင် သွေးလန့်တယ်”
“နင်သူနဲ့ပြောတုန်းဘယ်လိုခံစားရ လဲ” “ကြောက်လဲကြောက်မေးလဲမေး ချင်တာပေါ့” “အပျိုကြီးဆိုတာဒါမျိုးပဲ၊လိုလဲလို ချင်တယ် နာမှာလဲကြောက်တယ်” “ငါလိုချင်တယ်မပြောမိပါဘူး မသာကောင်” “ဒါပေမယ့်လိုတော့လိုချင်တယ် မဟုတ်လား” နီလာ့အတွေး ကဘယ်လိုနေလဲမခန့် မှန်းတတ်ပေ။ခါတိုင်း cbမှာတော့ ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စသူသိချင်တာတွေမေး ဖူးနေပေမယ့်ကျနော်ကိုယ်တိုင်က cbမှာမည်သည့်မိန်းကလေးနှင့်မဆိုစကားပြောရင်အနှောင့်အသွားမ လွတ်သောစကားကိုပြောလေ့မ ရှိပေ။ယခုတော့ထိုသို့သော လိင်ကိစ္စမျိုးပြောဖူးသောသူမှာမိမိသူငယ် ချင်းအရင်းကြီးဖြစ်နေသောအခါ နောက်ပြောင်ကျီစယ်ရင်းအနှောင့်အသွားမလွတ်သော စကားများကိုပြောမိနေသည်။နီလာလည်းသူ ငယ်ချင်းအရင်းကြီးမို့အရမ်းကြီး ရှက်မနေဘဲနှစ်ယောက်ချင်းမို့စကားတွေကြွယ် နေသည်။ကြာလျှင်ညစာနောက်ကျတော့မည်။“နီလာ နင်စတိဗ် ကိုမြင်ဖူးချင်လား” “နင်မြင်ဖူးရင်ပြပေးလေ”“စတိကတခြားလူ မဟုတ်ဘူး၊နင့်သူငယ်ချင်းအရင်းကြီး” “ဟင်ဘယ်သူလဲ” “ငါလေ” “အမ် မသာတကယ်လား” “တကယ်ပေါ့ဟ” “မယုံရင်ဒီမှာ ကြည့်လေ နင်နဲ့ငါပြော ထားတာတွေ” ” ဟီးမသာ ငါရှက်လိုက်တာဟာ” “ခုမှရှက်မနေနဲ့တော့နီလာရေ သွားကြမယ်နောက်ကျနေ ပြီ”
“နောက်ကျမှကောင်းတယ်၊လူရှင်း တာပေါ့” “လူရှင်းရင်ငါမဟုတ်တာလုပ်မိမယ် ဟ” “နင် ဟာလေတကယ့်ကောင်ပဲ၊ ကိုယ့်ဟာ ကိုယ်ကျအသုံးမကျဘူး၊ ငါ့ကိုလာခြိမ်းခြောက်နေတယ်” “ငါ့ကိုကျမကြောက်ဘူးပေါ့” “မကြောက်ဘူးဟေ့မကြောက်ဘူး ထ .လာ သွားမယ်”ပြောရင်းဆိုရင်းထသွားသဖြင့် ကျနော်လည်းသူ့နောက်ကိုထလိုက် ပြီးအိပ်ခန်းတံခါးသော့ယူကာပိတ် ပြီးလိုက်ရ တော့သည်။ အခန်းပြင် ရောက်ပြီး receptionနားဖြတ်မှလူတွေကငဲ့စောင်းကြည့်နေသဖြင့် “မသာ ငါ့နားကပ်ဟ ငါ့ကိုတမျိုး ထင် နေမယ်” “အေးပါဟ” သူ့အနားကပ်လမ်းလျှောက်ပြီးခပ် တည်တည်ဖြင့်လက်ကိုကိုင်၍လမ်း လျောက်ရာ “မသာ တော်တော် အသားယူတာ ကြည့်စမ်း၊ပိုင်စိုးပိုင်နင်းမဲ့သူ့မိန်းမ ကျနေတာပဲ” “လူမြင်ရင်ကြင်စဦးပေါ့ဟာ” “လုပ်မနေနဲ့အိုမင်းရွတ်တွနေပြီ” “ဘယ်ကောင်ပြောလဲအိုမင်းရွတ် တတယ်လို့” “ဘာဖြစ်လို့လဲ” “အခုမှကော်ရီးခေတ်ဟ” “ရွံစရာကြီး” “ဘာရွံစရာလဲမနာလိုမ ရှိနဲ့” ကားပေါ်ရောက်သည့်တိုင်ပေါက် ပေါက်ဖောက်နေကြသည်။
စားသောက်ဆိုင်ရောက်တော့ အအေးခန်းတခန်းယူကာမှာစရာများမှာပြီးကျနော်ကဘီယာတစ်ပုလင်းမှာလိုက်သည်။ “ဘီယာနဲ့မ တည့်ဘူးဆို”“အာစွတ်ယုံလောက်ပါဟာ” “အေးအများကြီးမသောက်နဲ့၊နင်က ကားမောင်းပြီးအိမ်ပြန်ရမှာ” “မပြန်ပါဘူး ၊ဒီညနင်နဲ့ အိပ်မယ်” “အာ မဖြစ်ပါဘူး” “ဘာလို့လဲမတွေ့ရတာကြာပြီပဲ” “နင့်အိမ်ဘယ်လိုပြောမလဲ၊နင့်အမေ အကြောင်းငါသိတယ်” “ငါဒီ ညပြန်မလာဘူးပြောထားတာ”“နင်တော့ပြသနာတက်ဦးမယ်နှော် နင့်အမေနဲ့” “မတကပြါဘူးဟ” “အေးပြီးရော” “ငါနင်နဲ့အတူတူ အိပ်မှာနှော်” “အာနင်ငါ့ကိုဘာမှမလုပ်ရဘူးနှော်” “ငယ်ငယ်ကလိုပေါ့ဟယ်၊လင်မယားလုပ်တမ်းကစားချင်လို့” “ငိုးမကလေးဘဝ ကဟာကိုလာပြောနေတာ” နီလာရှက်သွားသည်။ဒီကောင်တစ်ခုခုတော့သိထားပုံရသည်။ညအိပ် မည်ဆိုပဲ။အပျိုကြီးနီလာရင်ထဲတ မျိုးဖြစ်သွားမိသည်။ညအိပ်လျှင် ဒီကောင်ကငယ်ငယ်ကတည်းက လွယ်သည့်အကောင်မဟုတ်။ငါ့များ ဘုချင်နေလို့လားတွေးပြီး ရင်ထဲတုန် လှုပ်သွားသည်။သို့သော်ဟန်လုပ်ပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်လိုက်သည်။
ကျနော်လည်း ဘီယာတစ်ခွက်ကိုသောက်ချလိုက် သည်။ထို့နောက်နောက်ထပ်တစ် ခွက်သောက်ရန်ပြင်ရာ “တော်ပြီဟေ့ကောင် ငါ ဘီယာနံ့မခံနိုင်ဘူး” “အေးပါဟာ “ စားသောက်ပြီးဟိုတယ်ကိုပြန်လာ ကြသည်။ဟိုတယ်ကိုရောက်တော့ ကျနော်ကခြေ လက်ဆေးကြောပြီး အဝတ်လဲလိုက်သည်။ “ဟေ့ကောင်တကယ်အိပ်မှာလား” “တကယ်ပေါ့ဟ၊လင်မယားလုပ် တမ်းကစားပါမယ် ဆိုပါမှ” “ဟာ မဖြစ်ဘူးထင်ဟာ၊ငါကြောက်တယ်၊ နင်ရောငါရောကလေးတွေမ ဟုတ်တော့ဘူး” “နင်ကဘာကိုကြောက်တာလဲ” “အာမသိဘူးဟာကြောက်တယ်” “ဘာမှမကြောက်နဲ့မနာစေရဘူး” “ဟာ ဟေ့ကောင် ငါကြက်သီးထလာပြီ” “ဘယ်နားလဲပြစမ်းပါ ဦး”“ဒီမှာတွေ့လား” သူ့လက်မှာကြက်သီးဖုတွေထနေ သည်” “မကြောက်နဲ့အဲကြက်သီးဖုအာဘွား ပေးလိုက်ရင်ပျောက်ပြီ” သူ့ အနားကပ်ပြီးနဖူးကိုလှမ်းနမ်း လိုက်သည်။နီလာကအတင်းတွန်း ရာကျနော်ဖက်ထားကျနော်သူ့အား ဖက်လိုက်သည်။
“ဟဲ့ လွှတ်ဟ ငါယားတယ်” “မလွှတ်ဘူးဟေ့အပျိုကြီး” အတင်းပင်ချုပ်ပြီးနှတ်ခမ်းအားနမ်း လိုက်သည်။ “မသာအဲလောက် တောင်နမ်းချင်ရင် နမ်း..နမ်း ပြီးမှနင့်အမေနဲ့တိုင်မယ်” တမင်ပင်နှတ်ခမ်းကိုနမ်းစုပ်လိုက် တော့သည်။ပထမတော့နီလာငြိမ် နေသည်။အနမ်းနွေးနွေးကတမျိုးဖြစ်လာသည်။ပြန်နမ်းလိုက်သည်။ ပြီးမှစိတ်ထဲတမျိုးကြီးဆိုမှတမျိုး ကြီး “တော်ပြီဟာ ငဂျော့ ငါကြောက်တယ်” တကယ်လည်းကြောက်သည်။ ငဂျော့စိတ်ကဘယ်လိုနေလဲမသိ မိမိစိတ်ကိုတောင်မယုံချင် ကြာလျှင် စိတ်ပါ သွားနိုင်သည်မဟုတ်လား။ လိင်ဆက်ဆံမှု့ကိုလက်တွေ့ကျကျ မလုပ်ဖူးပေမယ့်မူဗီကြည့်ရင်းမိမိ၏လိင်စိတ်ကိုမိမိလက်ဖြင့် ဖြေဖျောက် ဖူးသည်။ယခုလိုငဂျော့နှင့်နီးနီးကပ် နေဖူးသောအခါစိတ်ထဲသာယာသလိုဖြစ်လာသည်။ ကျနော်ကရပ်မပစ်ဘဲနီလာ့ လည် ပင်းကိုစုပ်လိုက်ရာ “ငဂျော့ ငါကြောက်တယ်ဟ” “နင်ကဘာကိုကြောက်တာလဲ၊ မတော်တဆ ဗိုက်ကြီးသွားရင်ဘယ် လို လုပ်မလဲ” “လုပ်တိုင်းဗိုက်မကြီးပါဘူးဟာ” “အာ အကာအကွယ်မပါဘူးနှော်” “ပါပါတယ်ဟ စိတ်မပူနဲ့” “ဟမ် နင်ကြံစည်ထားတာ လား” “တမင်ကြီးကြံစည်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ရပါဘူးဟာ” “နင်နော် ငါကြောက်တယ်” နီလာတကယ်ကိုကြောက်တယ်။
သူ့လီးကနီလာ့ပေါင်ကြားကိုလာ ထောက်နေတယ်။ပူနွေးနွေးမာ တောင့်တောင့်ကြီး စိတ်ထဲတမျိုးကြီးဆိုမှတမျိုးကြီး။ ကြောက် ပေမယ့်နီလာ့အဝှာကစိုချင်နေပြီ။ “ငါနို့စို့မယ်ဟာ” “အာ ငဂျော့နင်နှော်” ငဂျော့ကနီလာ့ အဝတ်ကိုမတင်လိုက်တော့ဘရာ ပေါ်လာတယ်၊ဘရာကိုမတင်ပြန် တယ်။နီလာ့နို့လုံးဝိုင်းဝိုင်းတွေပေါ် လာတယ်။ “အင်းငယ်ငယ်တုန်းကလိုမဟုတ် တော့ဘူး” “အာ ဟေ့ကောင် “ နီလာရှက်သွားရတယ်။သူကနီလာ့နို့ကိုလျှာဖျားလေးနှင့်ထိတွေ့လိုက် တော့နီလာနို့သီးခေါင်းလေးကချွန် လာ သလိုနို့တအုံလုံးကြက်သီးဖု တွေထသွားရပြန်တယ်။ကျင်တက် တက်ခံစားမှု့နှင့်အတူအထိအတွေ့ ရဲ့ခံစားမှု့ရသတမျိုးကိုခံစား လိုက်ရ ပြန်တယ်။အလိုလိုညည်းမိတယ်။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “အာ့ အင်းးဟင်းးဟင်းးး” “ဂျော့ ငါ မနေတတ်ဘူး၊တော်ပြီ” ကျနော် လဲနို့သီးခေါင်းဖျားလေးကိုလျှာနှင့်ထိုးမွှေပြီး ယက်လိုက်နို့အုံတစ်ခုလုံးကိုစို့လိုက် နဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နီလာတစ်ယောက်အော်ညည်းသံများထွက်၍ပင်လာသည်။
ဂျော့ရဲ့လက်ကနီလာ့ရဲ့ပိပိအပေါ် ကနေအုပ်ကာပွတ်ပေးလေတော့ နီလာတွန့်ကနဲ့ဖြစ်သွားပြီးပိပိတအုံလုံးစိုသွားသလိုခံစားလိုက်ရ ပြီးရင်ထဲသိမ့်သိမ့်တုန်သွားရသည်။ အပေါ်မှပွတ်ရုံမကအကွဲကြောင်းတ လျောက်တဖြေးဖြေးပွင်ပေးရာပိပိ တအုံလုံးကြွတက်လာ လေသလား ထင်မှတ်ရအောင်ဖောင်းကြွလာခဲ့ သည်။အကွဲကြောင်းအလျောက်စုံ ဆန်လှုပ်ရှားပြီးနောက်မှာအကွဲ ကြောင်း အပေါ်နားအစေ့နာရာနား ကိုလက်ခလယ်ဖြင့်ဖြေးဖြေးချင်း ပွတ်လေရာ “အာ့!အင်း ဟင်းးဟင်းးး” မိမိလုပ်ဖူးသော်လည်း ယခု အထိအတွေ့နှင့်မတူပေ၊စိတ် တို့ချက်ချင်းထကြွလာသည်။မျက်လုံးစုံမှိတ်အော်ညည်းမိသည်။ ထိုစဉ်မှာပင်ဂျော့သည်နီလာ့နှုတ် ခမ်းအားစုပ်နမ်းလေရာနီလာလည်းစိတ်မထိန်းနိုင်ပဲပြန်လည်စုပ်နမ်း လိုက်တော့သည်။ ငဂျော့ဤမျှလုပ်တတ်လိမ့်မည်ဟုမထင်ခဲ့ ပေ။နီလာ၏ကာမစိတ်ကိုတ ဖြေးဖြေးထကြွလာအောင်လုပ် ဆောင်ပေးခြင်းကြောင့်နီလာ့၏ ကာမစိတ်တို့အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိလုနီးနီးဖြစ်လာသည်။
ထိုသို့ဖြစ်နေစဉ်မှာပင်ဂျော့ကရပ် ပစ်လိုက်သည်။ နီလာမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်စဉ် ဂျော့ကအဝတ်တွေကိုချွတ်ပစ်လိုက် သည်ကို တွေ့လိုက်သည်။မျက်လုံးကအလိုအလျောက်ပင်ဂျော့၏ ပေါင်ကြားနေရာကိုကြည့်စဉ်မာ ၍ထောင်မတ်နေသောဂျော့လီးကြီးအား တွေ့လိုက်ရသည်။ အပြင်တွင်ဤမျှကြီးမည်ဟုထင် မှတ်မထားသောလီးသည်ငါးမတ် လုံးမျှမကနိုင်ပေ။အရှည်သည် လည်း ခြောက်လက်မစွန်းစွန်းရှိ လောက်သည်။ “ဂျော့” “ပြောလေနီလာ” “ငါကြောက်တယ်” “မကြောက်နဲ့သူကလိမ္မာတယ်၊ နင့်ကိုမ နာစေရဘူး” “အာ “ “ကိုင်ကြည့်နီလာ” နီလာ့လက်ကိုကိုင်ပြီးလီးပေါ်တင် ပေးရာနီလာလည်းအယောင်ယောင် အမှားမှားပင်ကိုင် ထားမိသည်။အထိအတွေ့မှာတခြားသောနေရာများ နှင့်မတူပေ။ပူနွေးနွေးကလေးနှင့်တ မျိုးလေးဖြစ်ရသည်။ဂျော့ကနီလာ့လက် ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးလက်ကိုလီးအရင်းထိဆွဲချလိုက်ရာနီရဲသောထိပ်ဖူး ကြီးကပေါ်လာကာဒစ်ကကားကား ကြီးဖြစ်နေသည်။နီလာတွေး မိသည်က မှိုလိုလိုလီးလိုလိုဟူသောစကား ပင်ဖြစ်သည်။မှိုပွင့်ပမာဖြစ်၍လူတို့ တင်စားကြဟန်ရှိသည်ကိုတွေးမိ လိုက် သည်။
“ဘယ်လိုလဲနီလာ” “အကြီးကြီးပဲဟာ၊နိုင်ငံခြားမူဗီထဲ ကလောက်ရှိတယ်” “ပုံမှန်အဆင့်ပါပဲနီလာရယ်” “ဟုတ်ရဲ့လားဟယ်ငါက အပြင်မှာကလေးတွေဟာပဲတွေ့ဖူးတယ်” “အင်းလေနင်ကအပျိုကြီးပဲဥစ္စာ” “နင်နှော်” “နင့်ကိုလောကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့အုံးမယ်” “ဟင် ဘယ်လို” “နင့်ဟာကိုနမ်းပေးအုံးမယ်” “အာ မလုပ်နဲ့ဟာ၊ရှက်စရာကြီး” “နင်ကြိုက်သွားမှာပါ” “အာ” နီလာရှက်သွားရ ပြန်သည်။အမှန် တော့မူဗီတွေမှာမြင်ဖူးတော့အနမ်း ခံကြည့်ချင်ခဲ့သည်။သို့သော်မိမိမှာ ချစ်သူမှမရှိခဲ့ပါ။ယခုမူသူငယ်ချင်း အရင်းကြီးကနမ်းပေးမည်ဆိုသောအခါရင်တုန်မိသည်။ဂျော့ကနီလာ့ ပေါင်ကြားကိုဝင်ကာမျက်နှာအပ် တော့မသိစိတ်၏လှုံ့ဆော် မှု့ကြောင့်ပေါင်ကိုဟလိုက်မိသည်။ဂျော့က ပေါင်ကိုမတင်ပြီးစိုရွှဲနေသောမိမိပိပိ အားလျှာနှင့်အပြားလိုက်ယက်လိုက်သောအခါ “အားးး! “ လူကတုန်ယင်သွားသည်၊ပူနွေးစို စွတ်သောလျှာကအကွဲကြောင်းတ လျောက်ထိထိမိမိယက်သွားချေ သည်။ထိုနောက် လျှာဖျားကအကွဲ ကြောင်းတလျောက်တိုးဝင်လာပြီး နှုတ်ခမ်းသားများအားပွတ်ဆွဲသွား ပြန်သည်။
“အားးးအီးးဟီးးဟီးးး” ခါးကလေပေါ်ကြွသွားသည်။ပိပိတို့ မော့ဖောင်းလာသည်။လက်ကအိပ် ရာခင်းကိုသာတင်းတင်းဆုပ်ကိုင် မိတော့သည်၊ “အာ့! အင်းးဟင်းးးဟင်းးးရှီးးရှီးး” တရှီးရှီးနဲ့အရမ်းကောင်းနေသည်။ အစေ့ကိုလျှာနှင့်ထိုးမွှေပြီးတပြွတ် ပြွတ်စုပ် ပြန်သည်။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “အာ့အိုးးရှီးးရှီးးးအိုးးအားး” “အားဂျော့ အားးရှီးးရှီးးးအားငါပြီး တော့မယ် အားရှီးးရှီးးး အားး” တကယ်ပါဒီလိုပြီးသောအရာသာ မျိုးမတွေ့ဖူးသေးသောနီလာ့အဖို့ စိတ်ကကျေနပ်မိတော့သည်၊ “နီလာပြီးသွားပြီလား” “အင်းး “ “ကြိုက်ရဲ့လား” “အင်းးအားနာလိုက်တာဟာ” “အားနာမနေနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်မှ တော့အဆုံးထိသွားမှကောင်းတာ” “အင်းပါ၊ နင်လုပ်ချင်လို့မဟုတ်လား” “အင်းပေါ့ဟ” “နင်လုပ်ချင်ရင်လုပ်တော့၊ဗိုက် မကြီးစေနဲ့၊ကြီးရင်နင်တာဝန်ယူ” “အင်းပါဟာ” ဂျော့က ကွန်ဒွန်ထုပ်ကိုဖောက်ပြီး သူ့ရဲ့မာနေတဲ့လီးပေါ်စွပ်ချလိုက် သည်။ထိုနောက်နောက်ထပ်အထုပ်တစ်ထုပ်ကိုဖောက်ပြီးစွပ်ထားသော ကွန်ဒုံးပေါ်မှာသုပ်လိမ်းလိုက်သည် “ဂျော့ဖြေးဖြေးလုပ်နှော်” “အင်းပါဟ” ကျနော်လည်းနီလာ့ပေါင်ကြားဝင် ပြီးပိပိအဝကိုဂျေ ထပ်သုပ်ပြီးလီးတဲ့ကာတဖြေးဖြေးနှင့်ဖိသွင်းလိုက် သည်
“ဗျစ် ဗျစ် ဗျစ်” “အာ့ ဖြေးဖြေးနည်းနည်းနာတယ်” တဝက်တောင်မဝင်သေးပေ၊ နာတယ်ပြောပြီးပေါင်တွင်းသားများကိုနီလာက ညှစ်ထားသည်။ “စိတ်လျှော့ထားနီလာ” “အင်းပါ” ကျနော်လည်းနီလာ့နို့ကိုစို့ပြီးနီလာ့ စိတ်ကိုလျော့ထားစေသည်။ လီးကတင်း ကြပ်ကြပ်ဆို့ဆို့ကြီးဝင် လာပြီးပိပိအတွင်းသားများကနာ ကျင်နေတာမို့ဂျော့ကိုပြောလိုက် သည်။ ဗျစ် ဗျစ် ဗျိ” “အာ့!ဂျော့ နာ တယ်.ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ” လီးကိုတဆုံးအထိသွင်းပြီးနီလာ့ရဲ့ ခါးကိုလှမ်းဆွဲပြီးတဖန်းဖန်းမြည် အောင်လိုးလိုက်တော့တယ်။ကေရဲ့ လုံးကျစ်ကျစ်ခါးလေးကိုကိုင်ပြီးလိုးတာမို့ကိုကို့စိတ်တွေထန်နေလို့လားမသိဘူးမြန်မြန်လေးဆောင့်လိုး တော့ကေ့မှာရှေ့ကိုလဲမ သွားရ အောင်ထိန်းထားရတယ်။ကျပ်ကျပ် တည်းတည်းပိပိလေးကိုဂျော့ရဲ့လီးကထိုးခွဲပြီးဝင်လာတယ်။ “ဘွတ် ဖွတ် ဖန်းဖန်းဖန်းး” “အာ့အိုးးရှီးးရှီးးး” ပုံစံပြောင်းပြီးလျော့သွားတဲ့ကာမ စိတ်ကကေ့ကိုတဖန်ပြန်တက် လာစေတယ်။
ဒီအကြိမ်ကတော့ဝင်ချက် တိုင်းထိစေတယ်။သားအိမ်နားအထိကိုရောက်နေတာကြောင့်ပိုပြီးအရပ်ပုတဲ့ကေအတွက်အောင့်လာ တယ်။ “ဖွတ် ဖန်းးဖန်းးဖန်းး” “အာ့ရှီးးရှီးးးအိုးး နာတယ်ဂျော့” ကျနော်ကလဲအပျိုကြီးပိပိကိုအပီအပြင်လိုးရတာကြောင့်ကြပ် ထုပ်နေတာမို့ချော့လိုးတယ်ဆိုပေ မယ့်ပြီးချင်သလိုဖြစ်နေ တာကြောင့် “ငါပြီးတော့မယ် နီလာ” “ဟားးတပ်ထွက်လား” “လိ့ တပ်ထွက်ဖြစ်ရမလား” စိတ်ကိုထိန်းပြီးလိုးလိုက်တော့သည်။ “ဖွတ် ဖန်း ဖန်းးဘွတ် ဘွတ် ဖန်း” “အာ့ရှီးးရှီးးးအားပြီးပြီ အိုးး” နီလာလည်းကာမဆက်ဆံဖူးတာဒီတကြိမ်ထဲဆိုဆိုသလောက်အရသာထူးထူးဆန်းဆန်းကိုခံစားလိုက်ပြီးပိပိထဲကအရည်တွေစိမ့် ထွက်သွားသလိုခံစားရတယ်။တကိုယ်လုံးလည်းတုန်ယင်ကာဆင်းသွားပြီးပါးစပ်ထဲကအီးကနဲအသံထွက်သွားတော့ တယ်။သိပ်မ ကြာတော့တဲ့အချိန်မှာ ဂျော့လီးပျော့သွားမှန်းသိလိုက်ရတယ်။သူပြီးသွားတာကွန်ဒွန်းထဲမှာဆိုတော့နီလာသိပ်မစိုးရိမ်တော့ပါဘူး။ နီလာလဲမောပန်းသ လိုဖြစ်ပြီးအားကုန်သွားသလိုခံစားလိုက်ရပြီးကုတင်ပေါ်မှောက်ကျကာခနမှိန်းနေပေမယ့်ဂျော့ကတော့ အမောဖြေပြီးနီလာ့ကိုဖက်ထား တယ်လေ။
“နီလာ ကောင်းရဲ့လား” နီလာကောင်းတယ်လို့တော့နှုတ်မှမဖြေရဲပါဘူး။နောက်တကြိမ်ထပ် လုပ်မှာလဲစိုးရိမ်တယ်။ပိပိလေးက ကြိမ်းစပ်နာကျင်နေတာကြောင့် “အရမ်းနာတယ်ဂျော့၊ကြိမ်းစပ်နေတာပဲငါ့ဟာလေးတော့ကွဲပြဲသွား ပြီလားမသိတော့ဘူး” “မ ကွဲပါဘူးနီလာရယ်၊အပျိုစစ်စစ် လေးမိုပထမအကြိမ်ကဒီလိုပဲတဲ့၊ နောက်အကြိမ်ဆိုရင်နာတာပျောက် ပြီးဖီးလ်တွေရှိတော့မှာ” “နောက်တကြိမ်မလုပ်ရဲတော့ဘူး၊ခု တောင်အရမ်းနာနေပြီ” “အင်း ခုနောက်ထပ်မလုပ်တော့ဘူး လေ၊နောက်ရက်မှလုပ်မှာ” “တော်ပြီ၊နင်မလာနဲ့တော့” “လာမှာပဲ” “ငါဗိုက်ကြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ ၊ပြသနာတွေကြီးမယ်” “ဗိုက်ကြီးရင်နင့်ကိုငါယူမယ်” “လိတောင်နင့်ကိုမယူဘူး” “ဘာလိုလဲဟ” “ယူစရာလား၊ယူမှသောက်ပြောခံရ မယ့်ဟာ” “ဟာ ဘာဆိုင်လို့၊ဘယ်သူကပြော မှာ လဲ” “ပြောကြမှာပဲ အမိဖမ်းတယ်လို့” “အေးပါဟာ” စကားပြောနေရင်းနို့ကိုလာကလိ ပြန်တယ်။မထိတထိနဲ့လုပ်နေပြန်ပြီ ဂျော့ ရဲ့လှုံ့ဆော်မှု့ကြောင့်ကာမစိတ်ကတဖန်ဖြစ်လာ ပြန်ရော။ဒီလိုနဲ့နောက်တကြိမ်ပြန်စဖို့ရာတာစူလာခဲ့တယ်။
ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ပထမကြိမ်တုန်းကလိုကြောက်ရွံခြင်းမရှိတော့ပဲပိုမိုရဲတင်းသလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ “နီလာငါ့ညီလေးကိုနမ်း ပေးပါလား” “အေးပါ ငါတော့သိပ်မလုပ်တတ်ဘူး” “မူဗီထဲကလိုလုပ်ပေါ့ဟာ” “အေးလုပ်ကြည့်မယ်” နီလာဂျော့လီးကိုလျှာနဲ့အ ရင်တို့ ကြည့်ပြီးငုံစုပ်ကြည့်တယ်။စုပ်ရတာ တမျိုးလေးမို့စမ်းသတ်စုပ်ပြီးနောက်အဆင်ပြေတာနဲ့မူဗီထဲကလိုပဲစုပ်ပေးလိုက် တယ်။ငဂျော့ဆိုတအား အားတအီးအီးနဲ့ညည်းနေတာ။ ခုတော့နီလာလီးကြီးကိုငုံစုပ်တတ်ခဲ့တယ်။ ဂျော့ရဲ့ရဲ့စုပ်ယက်မှု့မှာလဲ သာယာ တတ်ခဲ့ပြီ။ကြိုက်လည်းကြိုက်သွား မိတယ်။ဂျော့ဟာကာမဆက်ဆံမှု့မှာ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်နေပြီဆိုတာသိ လိုက်တော့ တယ်။“ပြွတ်! ပြွတ်..ပြွတ်” “အာ့!ဖြေးဖြေးဟ “ “ပြွတ် ပြွတ်ပြွတ်” စုပ်ရုံမကလျှာဖျားနှင့်ပင်ထိုးမွှေ ပေးလိုက်သည်။ဒစ်ဖျားကို လည်း လျှာနှင့်ရစ်ပတ်ပြီးယက်လိုက်ရာ “အာ့ ရှီးးရှီးးးအားး ကောင်းလိုက်တာနီလာရယ်” လူကကော့ကော့ပြီးအော်ညည်းနေ သည်၊ဂွေးဥလေးကိုမနာကျင်စေဘဲဖျစ်ညစ်ပြီး စုပ်ပေးလိုက်သည် “ပြတ်!” “အိုး ရှီးးရှီးးး” ဂျော့လီးကအလွန်အမင်းကြီးလာ သလိုဖြစ်လာသည်။အကြောပျိုင်း ပျိုင်းထ၍မာကြောမှု့ကသံချောင်း တချောင်းအလားပင်ဖြစ်လာသည်။
“နီလာငါမရတော့ဘူးဟာလုပ်ချင်ပြီ” “နင်လုပ်ချင်ရင်လုပ်လေ” “အင်း ငါ့အကြိုက်ပုံစံပြင်လိုက်မယ်” နီလာအားကုတင်ပေါ်ကန့်လန့်လုပ် ပြီးခါးကိုကုတင်ဘောင်ဘေးအထိဆွဲကာယူလိုက်သည်။ထို့နောက်မှာ တော့ကျနော်ကကုတင်အောက်တွင်မတ်တပ် ရပ်ပြီးနီလာ့ခါးအောက် ခေါင်းအုံးဆွဲယူကာခုလိုက်သည်၊ နီလာ့အဖုတ်ကဖောင်းပြီးမို့မောက်နေသည်။ခြေနှစ်ချောင်းမ၍ထောင် လိုက်ကာပိပိထဲလီးတေ့ကာဖိချ လိုက်သည်။ “ဗျစ် ဗျစ် ဗြိ” “အို့! အာ့! အားးး” “ဖြေးဖြေးလုပ်ပါဂျော့ရာ” “အင်းပါဟ” နို့ကိုစို့ ပြီးဖြေးဖြေးချင်းပင်အသွင်း အထုတ်လုပ်လိုက်သည်။ “ဘွတ် ဗျစ် ဖွတ် ဖွတ် ဖတ်ဖတ်” “အင်းးဟင်းးဟင်းးး” လီးဒစ်ကပိပိ အတွင်းသားတ လျောက်ပွတ်ဆွဲသွားလေသည်။ အသွင်းအထုတ်တို့ညက်ညောလှ သည်။အစေ့ကိုထိသွားသည်။နီလာ ညည်း လောက်အောင်အသည်းခိုက် ကောင်းလွန်းလေသည်။အရှိန်တက် လာသောကာမစိတ်တို့အလျှံတညီး ညီးလောင်မြိုက်လာသည်၊ တဖတ် ဖတ်နှင့်အသားစိုင်ချင်းထိသံတို့က စည်းချက်တကျပင်ထွက်ပေါ်လာ သည်။ “ဖတ် ဖွတ် ဘွတ် ဖွတ်ဗျိ ဗျိ” “အာ့အိုးး အာ့ အင်းးဟင်းးး” လီးကအဝင်အတွက်ကပိုမြန်လေ ကာမစိတ်ကိုပိုကြွလေ။ပိုညည်းလေ မျက်လုံးကိုမှိတ်နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်၍ဂျော့ လည်ပင်းကိုဖက်ထားမိသည်။
ဆောင့်ချက်တို့၏စွမ်းအားကြောင့် ပင်နီလာစိတ်ကပိုကြွပြီး ပြီးဖို့ဖြစ် လာသည်။အထွဋ်အထိပ်ရောက် လေပြီးခါနီးလေ အော် ညည်းမိလေ၊ “ဖွတ်ဖန်းးဖန်းးဖန်းးးးဖန်းး” “အာ့ရှီးးးရှီးးးရှီးးး” နို့စို့နေရင်းလုပ်နေရာမှရပ်ပြီးမတ် တပ်ပင်ဆက်လိုးနေပြီးကာမစေ့ နေရာအားလက်ဖြင့်ပွတ်ပေးရာ “အားးရှီးးရှီးးးးအားငါပြီးတော့မယ်” နီလာ့အသံကပြီးခါနီးလေပိုညည်း လေဖြစ်လာသဖြင့်ကျ နော်လည်း စိတ်ကိုမတင်းထားပဲစိတ်ကိုလွှတ်ချ ပြီးတချက်ချင်းဆောင့်လိုးလိုက် သည်။ “ဘွတ်ဖွတ် ဖန်းဖန်းးဖန်းး” “အာ့ အိုး အီးးးးအားးးရှီးးရှီး” ဆတ်ကနဲတုန်ပြီး နီလာပြီးသွားတော့သည်။ဂျော့ လည်းဆက်တိုက်လှုပ်ရှားပြီးမကြာမီပင်အီးအားအော်ရင်းပြီး သွားတော့သည်။ထို့နောက်သူ့လီးမှကွန်ဒွန်ကိုချွတ်ပြီးအမှိုက်တောင်းတွင်သွားပစ်ရာနီလာမှအိပ်ရာကထပြီးတစ်ရှူး များယူပြီး ဂျော့အလာကိုစောင့်လိုက်သည်။ဂျော့မှာအေးကွန်းခန်းထဲချွေးများပျံလျက်ရှိနေသည်မ ဟုတ်လားထို့ကြောင့်ဂျော့ကနီလာ့အနား လာမှအိပ်ရာမှထ၍ချွေးများ ကိုသုတ်ပေးလိုက်တော့သည်။ ဂျော့ကပြုံးလျှက်ပင် “အဆင်ပြေရဲ့လားနီလာ” “လိအဆင်ပြေလား၊ အလကားရရင် ရေတောင်ဗိုက်ကားအောင်သောက် တဲ့ကောင်၊လုပ်တာမချိမဆန့်နှင့်ခံရ တဲ့လူကိုမငဲ့ညာဘူး” “ဒီဟာကဒီလိုလုပ် မှထိတာနင်သိပါတယ်” “လိတောင်မသိဘူးဟေ့ကောင်၊စ ကားမပြောနဲ့တော့မောနေပြီမဟုတ်လားအိပ်တော့” “အေးပါဟာ” ဂျော့ကနီလာ့ကိုဖက်၍အိပ်ရာနီလာ လည်းကျေနပ်ရပြန်သည်။နောက်တော့နီလာလည်းအိပ်ပျော်သွားတော့ သည်။
နှစ်ယောက်သားဖက်ပြီး အိပ်ပျော်သွားကြတယ်။နီလာလည်းနှိုက်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်သွားပြီးပြန် နိုးလာတော့ကိုယ်တော်ချောက နီ လာ့ကိုဖက်ထားသေးတယ်။ ဂျောရရဲ့လီးကမာတောင်နေတဲ့ပုံရ တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နီလာကို လာထောက်နေသည်။ နီလာ ကြားဖူးတာကယောက်ျား လေးတွေကမနက်ပိုင်းဆိုဟိုမုန်းထ ကြွတယ်တဲ့။ဒီအချိန်ဆိုရင်တောင် နေလေ့ရှိတယ်တဲ့လေ။နီလာက ဂျော့ဟာကိုကိုင်ကြည့်ချင်လာ တာကြောင့်ကိုင်ကြည့်လိုက်တယ်။ ပူနွေးနွေးမာတောင့်တောင့်လေးနဲ့ ကျန်တဲ့အသားထိကြည့်သလို မျိုးမ နေတာကြောင့်ကိုင်ရတာတမျိုးလေးဖြစ်တော့ကိုင်ကြည့်ရင်းဖွဖွလေး ဆုပ်ကိုင်ပေးလိုက်ရာဂျော့နိုးလာ ပြီး “နီလာလုပ်ရင် လဲသေချာလုပ်ပေးလေ” “ဟမ်.. ငါကဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှာလဲ” ဂျော့ကပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး “လာ.ဒီလိုလုပ်” ဂျော့က နီလာ လက်ကိုကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်သလိုလုပ်ပြလိုက်ရာ နီလာလည်းဂျော့ပြသကဲ့သို့လုပ် လိုက်သည်။ ဂျော့လီးကထိပ်ဖူးကြီးကားလာ ကာတဖြေးဖြေးမာပြီးကြီးရှည်လာ သည်။ “ကြီးလာပြီဟ ဂျော့ရ” “အေးလေ သူကလုပ်ချင်နေတာကို” “လုပ်မနေနဲ့တော့ ဗိုက် ဆာနေပြီ၊မ နက်စာသွားစားကြမယ်” “လုပ်စမ်းပါဦးနီလာရယ်၊ငါ ကောင်းနေပြီ” နီလာဂွင်းတိုက်ပေးရင်းနှင့်ကြီး ကာတ ဆတ်ဆတ်တောင်လာသော လီးကိုစိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်လာပြီး ခေါင်းငုံ့ကာတချက်ငုံစုပ်လိုက်သည်
“ပြတ်” “အားး ရှီးးး” “”လုပ်မနေနဲ့တော့တော်ပြီ ဗိုက်လဲဆာပြီ” ဟုပြောပြီးနီလာကုတင်ပေါ်ကဆင်းပြေးတော့သည်။ “ဟာ ကွာ ကောင်းခန်းရောက်မှတန်း လန်းကြီးကွာ” “ခစ်ခစ် ခစ်” နီလာရေချိုးခန်းတံခါးကဂျော့ကို ကြည့်လိုက်ပြီးတံခါးပိတ်ထား လိုက် သည်။ ဂျော့လီးတရမ်းတရမ်းနဲ့ကျန်ခဲ့ သည့်အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးရီလိုက်သည်။ “နီလာနင်တော်တော်ဆိုးတယ် ငါတော့ဒုက္ခရောက် ပြီ” “ဟားးဟားးသေလိုက်လေ” နီလာမျက်နှာသစ်ရေချိုးပြီးသဘက်ပတ်ကာအပြင်ကိုထွက်လိုက် ရာဂျော့လီးမှာမပျော့သေးပဲ တောင်နေလျက်ပင်ရှိသေးသည် “အမယ် မပျော့သေးဘူးကြည့်စမ်း” “ဘယ်ပျော့မလဲ နင်က အာငွေ့ပေး သွားတာကိုး” “ခစ် ခစ် ခစ်၊ကဲပါမနက်စာစားပြီးမှ သူ့ကိုဆက်ပြီးအနိုင်ကျင့်မယ်” “အေးပါအဲဒီအချိန်ငါလဲနင့်ညီမ လေးကိုအနိုင်ကျင့်မှာ” “ပျင်းသေး တယ်သိလားဟေ့ကောင်” “အေးပါ ကြည့်ကြသေးတာပေါ့” ကျနော်လည်းရေချိုးခန်းထဲဝင်ရင်းမျက်နှာသစ်သွားတိုက်ပြီးရေချိုး လိုက်သည်။အပြင်ကိုထွက်လာရာ နီလာကအဝတ်အစားဝတ်ပြီးမိတ်ကပ်ပါးပါးအုပ်ထားပြီးဖြစ်နေသည်။
နီလာ့ကိုမြင်မှလီးကပြန်တောင်ချင်လာသည်။အတွင်းခံကောက်စွပ် ပြီးနောက်အတွင်းခံထဲမှလီးကဖု ဖောင်းကာရုန်းကန်နေရ ရှာသည်။ ပုဆိုးတစ်ထည်ကောက်ဝတ်ပြီးအပေါ်ကအင်္ကျင်္ီဝတ်ကာခေါင်း ဖြီးပြီးနောက် “ရပြီ သွားတော့မလား” “အေးသွား မယ်လေ”နီလာတံခါးနားမသွားခင်ဂျော့ နားကပ်ပြီးဖုဖောင်းနေသောနေရာ ကိုတချက်သွားကိုင်ပြီးတံခါးဝသွား ကာလျှာထုတ် ပြောင်ပြလိုက်သည်။ “နင်နှော် ငါ့ကိုအရှက်ခွဲနေတာ” “ခစ် ခစ် ခစ်” ဟိုတယ်ကမနက်စာဘူးဖေးကျွေး တော့ဟိုတယ်က အစားအစာများကို ဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းယူစား လိုက်သည်။နီလာကအတွေးတ ချက်ပေါက်ကာဂျော့နားကိုကပ် ပြီး လင်မယားပုံစံပေါက်အောင်လုပ် နေလိုက်သည်။နီလာထိုကဲ့သို့ လုပ်လေကျနော့်မှာအသဲယားလေ ဖြစ်လာပြီး “နီလာငါလူရှေ့သူ ရှေ့ဖက်နမ်းမိ မယ်” “ဟ.ဟားး” “မလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဟဲ့၊လူတွေကညားခါစလင်မယားလိုထင်အောင် လုပ်နေရတာ” “အင်း ပါ.အင်းပါ” မချင့်မရဲဖြစ်နေသောဂျော့ပုံစံ ကြည့်ပြီးစိတ်ထဲရီလဲရီချင်တယ်။
“ငါအအေးသောက်ဦးမယ်ဂျော့ ထယူပေး” “အင်းပါ” ဂျော့ကိုတမင်ညင်းဆဲလိုက်သည်။ ဂျော့ကခန္ဓာကိုယ်ကိုခပ်ယို့ယို့လုပ် ပြီး သွားယူနေတဲ့ပုံကိုဓာတ်ပုံလှမ်း ရိုက်လိုက်သေးတယ်။သူမတ်တပ် ရပ်နေလို့မရတဲ့ပုံပေါ်နေတယ်၊မတ်တပ်တာသာရပိရင်သူ့ဟာ ကြီးကရှေ့ငေါထွက်နေမှာမြင်ယောင်နေမိ တယ်လေ။ဂျော့အအေးခွက်ယူ လာပြီးပေးတော့ကြည်ပြာယူ သောက်တယ်။ “ဂျော့ နင်တော်ပြီလား” “အင်းလေ” “အစားနည်းလှချည်လား” “ဗိုက်အရမ်းတင်းနေလို့မဖြစ်ဘူး” “ဟင်ဘာလို့လဲ” “ဟင်းးဟင်းးး” နီလာသိလိုက်ပြီ၊ကာမဆက်ဆံ ချင်ရင်ဗိုက်အရမ်းတင်းနေလို့မဘူးဆိုတာကိုပေါ့ နီလာပုခုံးတွန့်ပြပြီးမျက်လုံး ပြူးပြလိုက်သည်။ နီလာဒီတစ် ခေါက်ခရီးထွက်ရတာပျော်နေသည်။စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ရှိသလို လဲဖြစ်ရသည်။ စားသောက်ပြီးရုံးသွားရန်ကလဲစော သေးသည်မို့ဟိုတယ်ဘက်ပြန်လာလိုက်သည်။ အခန်းထဲရောက်သည်နှင့်ဂျော့က နီလာကိုဖက်ကာပွေ့ချီလိုက် သည်။
“ဟာ ဟေ့ကောင်” နီလာပထမတော့လန့်သွားပြီး ဂျော့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်သည်။ ဂျော့ကနီလာကိုကုတင်ပေါ် အသာအယာချ လိုက်ပြီးနှုတ်ခမ်း သားများကိုစုပ်ယူတော့သည်၊ “ပြွတ်..ပြွတ်” မည်သို့သောအကြောင်းတရားတွေ ကိုနီလာမသိပြန်နမ်းချင်လာ သဖြင့်နီလာပြန်နမ်းစုပ်လိုက်သည်။ဂျော့အနမ်းကနီလာ့တကိုယ် လုံးနွေးထွေးသွားစေသောအနမ်းတို့ ကိုခံစားရလိုက်သည်၊ နှုတ်ခမ်းမှတဆင့်လည်တိုင်အထိစုပ်နမ်းလေရာ တကိုယ်လုံးအကြောတို့တဖိန်းဖိန်း တရှိန်းရှိန်းဖြစ်လာကာပါးနှင့်နားပူ နွေးလာ သကဲ့သို့ကာမစိတ်တို့ပါထ ကြွလာခဲ့သည်ကိုနီလာသိလိုက် ရတော့သည်။အင်္ကျီကိုမတင်ပြီးဘရာကိုပင့်တင်သွားသည့်ဂျော့ကို လည်းမတားမိတော့ပေ။ဂျော့အလိုကျနေချင်နေမိသည်။ဂျော့လီးက လည်းမိမိပေါင်ခြံကိုလာထိနေ သည်လေ။မိမိနို့ကို တပြွတ်ပြွတ်စို့ ရင်းပေါင်တံတလျောက်ပွတ် ပေးနေသည့်အခါအထိအတွေ့၌ သာယာလာပြီးလူကအလိုလိုညည်းမိတော့သည်။ “အင်းးဟင်းးးဟင်းး” နို့ကိုနာကျင်အောင်မစို့ပဲလျှာဖျားနှင့် သာစို့ပေးသဖြင့်ကာမစိတ်တို့တိုး လျက်လာခဲ့သည်။ထို့အပြင်နီလာ တင်သားများကိုဖြစ်ညှစ်ပြီးလုပ်နေသဖြင့်နီလာ့ပိပိမှအရည်တို့စိုစွတ် လာခဲ့ရပြန်သည်။ဂျော့က နီလာ့အဝတ်နှင့်အတွင်းခံကိုပါဆွဲ ချွတ်ရာနီလာလည်းခါးအောက်ပိုင်း ကြွပေးလိုက်သည်။အောက်ပိုင်း ၌အဝတ်တို့ကင်းမဲ့လေသည်။ပေါင် ကြားထဲ လက်ရောက်လာသဖြင့် နီလာလည်းပေါင်ကိုဟပေးလိုက် သည်။အကွဲကြောင်းတလျှောက် ဂျော့လက်တို့စုံဆန်ပွတ်ချေသည်။လူ လည်းရင်ခုန်သလိုဖြစ်လာကာတကိုယ်လုံးလေထဲရောက် နေသလိုမောပန်းလာသလိုဖြစ်ပြီး အာခါင်တို့ခြောက်လာသည်။ထိုအ ရာသည်ပင်ရင်ခုန်ခြင်းလား၊ကာမ စိတ်တို့ဖြစ်ခြင်းလားကြည်ပြာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ရာအချိန်မရပေ။
ညည်းမိလျက်သာနေမိသည်။ ဂျော့ကနီလာ့ဆီးခုံနားမျက်နှာအပ် လိုက်သောအခါနီလာ့စိတ်တို့ လေထဲလွင့်မြောသလိုခံစားရပြီး ပေါင်ကိုကားလျက်မြှောက်ပင့်ပေး မိသည်။အကွဲကြောင်းတလျောက် စုံဆန်လူးရင်းယက်ပေးလာသော ဂျော့ လျှာဖျား၌အသိစိတ်ကိုလက် မြှောက်အရှုံးပေးသကဲ့သို့သာစိတ်ကိုလွှတ်လိုက်တော့သည်။ပူနွေးစို စွတ်သောလျှာဖျားကပိပိ အတွင်း သားတလျောက်ထိုးမွှေပြီးအစေ့ကို ထိုးကလော်လေရာ “အားးရှီးး ရှီးးအားးဂျော့” အောက်ပိုင်း၌ဂျော့ကဖိထား၍ အပေါ်ပိုင်းကြွတက်ပြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဂျော့ခေါင်းကိုဖိထားမိလိုက်သည်။ကာမခုလုတ်ခေါ်သောကာမဖူးကို စုပ်ခံလိုက်ရသည်ဖြစ် ရာကာမစိတ်တို့အလျှံတညီးညီးထကာပိပိထဲမှ အရည်များစီးထွက်စေလိုက်သည်။ ဒီနေ့လုပ်ခြင်းသည်နီလာ၏ဒုတိယ အထိအတွေ့ဖြစ်သဖြင့်မနေ့ည ကထက်ပိုကောင်းနေသည်။အဖုတ်ထဲလက်နဲ့ကလော်ပြီးအစေ့ကိုတ ပြွတ်ပြွတ်စုပ်ရာနီလာ့တ ကိုယ်လုံးထွန့်ထွန့်လူးစေရပြန်သည်။ “အားးရှီးးရှီးးးး တော်ပြီအားးး” နီလာညည်းရင်းပင်တစ်ချီပြီ သွားစေသည်။မြောက်တက် လာသောခန္ဓာကိုယ်မှာပြန်ပြီးပြုတ်ကျ လာသည်။လူလဲညည်းရသဖြင့်အလွန်ပင်မောဟိုက်၍နေရတော့သည်။
“နီလာ ပြီးသွားသလား” “အင်း “ “ငါလုပ်တာကောင်းရဲ့လား” “နင်ကဆရာကြီးပဲ” “ဟားးဟားးးး” ဂျော့အဝတ်တို့ချွတ်လေပြီ။လီး ရမ်းရမ်းနဲ့အမောဖြေနေသော နီလာ့အနားကပ်အိပ်ရာနီလာက အမောဖြေရင်ရင်းဂျွောလီးကိုဂွင်းတိုက်ပေးသည်။ထိုနောက် တော့ နီလာလည်းတတ်သမျှမှတ်သမျှသောပညာနဲ့ဂျော့လီးကိုငုံစုပ် တော့သည်။အာငွေ့ကြောင့်လား နီလာမသိချေ။ဂျော့လီးကအရမ်း ပင်ကြီးလာသည်။ထိပ်ဖူးဝ၌အရည်တို့စိမ့်ထွက်လာသည်၊ငံပြပြအ ရည်ဖြစ်သော်အနံ့နှင့်အရသာတို့မဆိုးတောကြောင့်နီလာစုပ်ရ တာအဆင်ပြေသည်။ထွက်လာသောအရည်တို့ကိုလည်းပါးစပ်ထဲငုံမထား ပဲမြိုချရင်းစုပ်လိုက်သည်။ထို့အပြင် ဂျော့၏ဂွေးဥကြီး ကိုလည်းအသာ အယာညှစ်ပေးလိုက်သည်။ဂျော့၏ဂွေးဥမှာပျော့တွဲမနေဘဲ၊ကျစ် လစ်နေသည်။သင်ပေးခြင်းမဟုတ်ပဲဂွေးဥကိုပါ နမ်းပေးလိုက်သည်။ ဂျော့လီးကားအလွန်မာတောင်ကာမိုးပေါ်သို့ပြန်တက်မည်သကွဲသို့ဖြစ် လာသည်။ထိပ်ဖူးကြီးလဲနီရဲလို့လာ သည်။စုပ်ရသည်ကိုကျေနပ်လို့နေမိ သည်။မျက်လုံးမှိတ်ပြီးတအင်းအင်း ညည်းနေသောဂျော့ကို “တော်ပြီဂျော့အာညောင်းနေပြီ” “အာညောင်းရင်ရပ်လိုက်လေ၊ငါ လဲအရမ်းလုပ်ချင်နေပြီ” “အင်းလုပ်လေ” နီလာပက်လက်လှန်ပြီးအိပ်လိုက် သည်။ကျနော်ကနီ လာ့ပေါင်ကြားဒူးထောက်ဝင်ပြီးသူ့လီးကြီးနဲ့ နီလာ့ပိပိကိုအထက်အောက်စုံဆန်လုပ်ပြန်သည်။ကျင်တက်သွား သောခံစားချက်နဲ့ အညီနီလာညည်းလိုက်သည်။ထိုနောက်ဂျော့ကနီလာ့အဖုတ်ဝကိုလီးတေ့ပြီး တဖြေးဖြေးသွင်းလိုက်တော့သည်။
“ဖျစ် ဗျစ် ဖျစ် …” “အာ့ အင်းးဟင်းးဟင်းး” လီးကနီလာ့အဖုတ်ဖဲတိုးဝင် သွားသည်။အရည်တို့စိုရွှဲနေ၍သာ တအိအိနဲ့ဝင်သွားသည်။ လီးအ ထဲရောက်သည့်အထိအတွေ့သည်လည်းအဖုတ်နံရဲသားများကိုပွတ် သွားလေရာအရသာရှိနေသလိုခံစား လိုက်ရပြီးနီလာ ညည်းမိတော့သည်။ကျနော်လည်းနီလာ့ပုခုံးသားကိုဆွဲ ပြီလီးကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပေးလိုက်တော့တယ် “ဗျစ် ဘွတ် ဖွတ် ဖွတ်” တတိယအကြိမ်လိုးခြင်းဖြစ်သော်လည်းတဖြေးဖြေးချင်း သာအသွင်းအထုတ်လုပ်ရသည် ။စေးပိုင်တင်းကျပ်မှု့ကိုအပြည့်အ ဝရရှိပြီးနီလာ၏လှမ်းဖက်ခြင်းကိုခံ ရကာလက်သည်းအချို့က ကျောပြင်ကိုလာပြီးမထိတထိနဲ့ ထောက်နေတဲ့အခါစိတ်တို့ပိုကြွလာ ပြီးခါးကိုမတ်၍အရှိန်တင်ပြီးတဖွတ်ဖွတ်တဖန်းဖန်းမြည်အောင်လိုး လိုက်တယ် “ဘွတ်ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ်” “အာ့အင်းးဟင်းးဟင်း” .အစေ့နှင့်ထိတွေမှု့ဘေးနှုတ်ခမ်း သားများနဲ့ပွတ်တိုက်မှု့တွေကြောင့် မှာခံစားဖူးပေမယ့်နောက်ထပ်ပေါင်းများစွာလိုချင်နေသော အရသာတ မျိုးကိုခံစားရပြီးညည်းမိတယ်။
တချက်တချက် ဆောင့်ချက်တွေကြောင့်အရသာအရမ်းရှိပြီးနီလာမှာတုန်တက်လာခဲ့တယ်။ “ဖွတ် ဘွတ် ဖန်း ဖန်းဖန်း” “အာ့ !အိုးး ရှီးးရှီးးးအိုးး” ကာမစိတ်တို့အထွဋ်အထိပ်ရောက် လာပြီးညည်းသံပိုထွက်ခဲ့တယ်။ ပိပိအတွင်းနံရံတွေကနေကဂျော့လီးကိုအရမ်း ညှစ်သလိုလဲခံစားရ လာတယ်။ ဂျော့ကနီလာမှာတတိယအ ကြိမ်ဖြစ်ပြီးပြီးမည့်အချိန်မှာကြာ မည်မှန်းသိနေသည့်အတွက်ပင် မနားတမ်းဆောင့်လိုက်သေးသည်။ ထိုနောက်တော့ဂျော့ကနီလာ့ ခါးကိုကိုင်၍ပင်လီးကိုမချွတ်ပဲမ လိုက်ကာပက်လက်လှန်လှဲချ လိုက်ရာနီလာမှာအလိုအလျောက် ဂျော့အပေါ်ရောက်သွားသည်။ “ဟကောင်ရာငါကအပေါ်ကလုပ်ရ မှာလား” “တစ်ခါတလေ စုံ အောင်လုပ်ကြည့် စမ်းပါဟာ” နီလာသိလိုက်ပါပြီဂျော့ကမိမိကိုအပေါ်စီးကနေလုပ်ခိုင်းမှန်းသိ တာကြောင့်ခြေထောက်တွေပုံမှန် အနေအထားရောက်စေရန်ပြုပြင် လိုက်ပြီးရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ် ပေးလိုက်သည်။ငါးမိနစ်ခန့်လုပ်ပေး ပြီးနောက်မှဂျော့ကနီလာ့ ခါးကိုကိုင်ပြီးကြွခိုင်းလာတာကြောင့် နီလာအပေါ်စီးကနေပြီးဆောင့်ချ ပေးလိုက်သည်။မိမိလိုအပ်သော အနေအထားအထိ အသွင်းအထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ဂျော့ရင်ဘတ်ကိုလက် ထောက်ကာအားယူပြီးတချက်ချင်း ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။လီးကပိပိထဲတိုးဝင် လာသလိုမိမိစိတ်ကြိုက်ထိစေချင်တဲ့နေရာကိုထိန်းပြီးလုပ်နိုင်သဖြင့်နီလာသဘောကျသွား သည်။ကောင်းလွန်းသဖြင့်အော်သံ ပို ထွက်တော့သည်။အသားချင်းထိသံတဖတ်တဖတ်နှင့်လီးဝင်သံတဇွိဇွိ၊တဗျိဗျိပင်မြည်နေတော့သည်။မည်သို့ပင်ကောင်းစေကာမူ အလေ့အ ကျင့်မရှိသောနီလာ့အတွက် ကြာကြာလုပ်နိုင်ရန်မလွယ်မော ဟိုက်လာသဖြင့် “ဂျော့ငါအရမ်းညောင်းနေပြီဟ” “အေး အာ့ဆိုကုန်းပေးပေါ့” “ဟင်..နင်နှော်ဇော်မိုးသိပ်အသားယူလွန်းနေပြီ” “အကွက်စုံမှအရသာပိုသိတာဟ” “မသာ…လိပ်မျိုးလုပ်ရင် လဲမြန်မြန် လုပ်ကျိမ်းစပ်နေပြီ” ဂျော့ကိုစိတ်ဆိုးနေသလိုပြော လိုက်ပေမယ့်နီလာကတော့ဂျော့အလိုကျအိပ်ရာပေါ်လေးဘက် ထောက်ပြီးကုန်းပေးလိုက်သည်၊
ကျနော်လည်းသူလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံကို နီလာကခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်အိပ်ရာကထလာကာနီလာ့ နောက်မှာမတ်တပ်ရပ်ပြီးဖင်ကို ကြည့်လိုက်သည်၊ကိတ်လွန်းတဲ့ နီလာ့ဖင်ကြီးဟာဝိုင်းစက်လှပ ပြီးခါးကျဉ်ကျဉ်ကလေးကြောင့်ပို ပြီးဆွဲဆောင်မှု့ရှိနေတော့ တယ်။တင်သားကိုလက်ဖဝါးဖြင့်တချက်နှစ် ချက်ရိုက်ချင်စိတ်လည်းပေါက်လာသဖြင့်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။ “ဖတ် ဖတ်.” “အာ့ အိုး မသာနာတယ်ဟ” ဖြူဖွေးလှသောနီလာ့တင်သား မှာနီရဲသွားတော့တယ်။ “ဒီလောက်လှတာကွာရိုက်ယုံတင်မကဘူးကိုက်ပစ် ချင်တာ” “နင်ကတကယ်နှာဘူးကြီး” “နှာဘူးမို့နင့်ကိုဘုနေတာပေါ့ဟာ” “လုပ်မှာဖြင့်မြန်မြန်လုပ်ငါလဲတန်း လန်းကြီးပဲ” “အေးပါ ဟ”ဂျော့ကလီးကလီးကိုကိုင်ပြီးအ ဖုတ်ထဲထည့်လိုက်သည်။ ဖျစ် ဗျစ် ဖျစ် …” “အာ့! အင်းးဟင်းးဟင်းး” ကုန်းပြီးခံရတဲ့အရသာ ကတမျိုးပါ အစကတော့အောင့်သလိုဖြစ်ပြီးအထဲထိလီးကမြုတ်ဝင်သွားချိန်မှာ တော့အဆုံးထိထိထိရောက်ရောက် ဝင်သွားတဲ့ခံ စားမှု့မျိုးကိုနီလာ ခံစားလိုက်ရသည်။
“ဘွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ်ဖန်းဖန်းးး” “အာ့!အင့်! အင်! အင်းဟင်းး” ဂျော့ဆောင့်ချက်ကြောင့်နီလာမှာနာသလိုအောင့်သလိုလိုနဲ့ ကောင်းသလိုလိုဖြစ်လာတယ်၊ဂျော့ကနီလာ့တင်သားနှစ်ခြမ်းကိုဖြဲကိုင် ပြီးဆောင့်ချက်ပြင်းပြင်းနဲ့လိုးလေ နီလာမှာအော်ညည်းမိ လေ၊တ ဖြေးဖြေးနဲ့နီလာမှာကာမစိတ် အထွဋ်အထိပ်ထိရောက်လာတယ်။ ဂျော့အတတ်ကောင်းတွေတတ် တယ်။နီလာ့ဖင်စအိုဝ ကိုလက်သည်းနှင့်ထိသလိုမထိသလိုလုပ်တော့နီလာမှာစိတ်တွေပိုထလာပြီး ဘွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ်ဖန်းဖန်းးး” “အာ့!အင့်! အင်! အင်းဟင်းးဂျော့ လုပ် လုပ် ငါ ငါပြီးတော့မယ် အင့်” ဂျော့လည်းကြာကြာမထိန်းနိုင် တော့ချေ။အရမ်းလှပတဲ့ဖင်ကြီးကို အားရပါးရဆောင့်ရတဲ့အရသာက အလွန်ပင်ကောင်းလာကာပြီးခါနီး လာပြီးနီလာနှင့်ပြိုင်တူပြီးနိုင် ရန်စိတ်နှစ်ပြီးမြန်မြန်ပင်လိုး လိုက် ရာနီလာရဲ့အော်ညည်းသံနှင့် ပိုထွက်လာတယ် “ဘွတ်ဖတ် ဖတ် ဖန်းဖန်း” “အိုးးရှီးးအိုးး ရှီး အား ငါပြီးတော့ မယ် အားး” “ဘွတ်..ဖတ် ဖတ် ဖန်းဖန်း”” “ဟုတ် အာ့ ရှီးးရှီးးးအားးပြီးးပြီအား” နီလာတစ်ယောက်အသည်းအ သန်အော်လာပြီးနောက်ငြိမ် ကျသွားရတယ်။ကျနော်လည်းနီလာမှောက်၍လဲကျမသွားစေရန်ခါးကို ကိုင်ကာထိန်းထားနောက်အ ကြိမ်နှစ်ဆယ်ခန့်ဆက်တိုက် တွန်း လိုး လိုးလိုက်ရာသုတ်များတဖြော ဖြောနဲ့ကွန်ဒွန်ထဲထွက်သွားရတော့တယ်။
“ဟားးကောင်းလိုက်တာနီလာ ရာလူလည်းချွေးတွေနဲ့နစ်ရောပဲ”“အင်းလေ နင်အလကားရတယ်ဆိုပြီးအသေ ကြိတ်နေတာကိုး” “နင်ကသာအသေကြိတ်တယ်ပြော နေတာငါကအားကိုမရသေးဘူး” “ဒီလောက်လုပ်နေတာဘာလို့အားမရတာလဲ” “အလွှာပါး ပေမယ့်တစ်ကမ္ဘာခြား သလိုခံစားရတာဒင်းကြောင့်အားမ ရတာ” ကွန်ဒွန်ကိုလက်ညှိုးထိုးညွှန်ပြပြီး ပြောသောကြောင့် “ဒင်းရှိလို့ ငါအလုပ်ခံတာ၊ဒင်းမရှိရင် နင်လဲပြန်ဘဲ” “အေးပါကွာအေးပါ” “ရုံးသွားရမှာနောက်ကျနေပြီရေချိုး နင်လဲအလုပ်သွားရမှာ မဟုတ်လား” “အေး ရေချိုးတော့” “အေးပါဟာ” ” ငါအရင်ရေချိုးခန်းဝင်အုံးမယ်” “အတူတူးချိုးရအောင်” “ကြာသွားမယ်ဟ” နီလာကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ထသွားရာ ကျနော်ကုတင်ပေါ်ထိုင်၍ကျန်ခဲ့ လိုက်သည်။သူရေချိုးပြီးအလှပြင်တုန်းကျနော်ရေချိုးလိုက် တယ်။ ပြီးတော့သူ့ကိုရုံးကိုလိုက်ပို့ပြီး ကျနော်လဲအလုပ်ကိုသွားလိုက် တယ်။နေ့လည်ရောက်တော့နီလာ့ဆီကဖုန်းဝင်လာပြီး “င ဂျော့ငါ့ကိစ္စအဆင်ပြေသွားပြီ” “အာ ငါကအဆင်မပြေစေချင်သေး ဘူး”
“လူယုတ်မာကြီးကြည့်စမ်း” “ဟီးးတကယ်ပြောတာဟ” “ငါ့လိ၊ငါဒီနေ့ပြန်မယ်” “အမ် ဘယ်အချိန်လဲ” “ညနေငါးနာရီ “အေးငါ လာခဲ့မယ်” ကျနော်လဲချက်ချင်းထွက်လာပြီးသူ့ရွာအတွက်လက်ဆောင်တွေဝယ် လိုက်သည်။ထိုနောက်သူ့ဆီရောက် သွားတော့သူ က အိပ်နေသည်။ တံခါးခေါက်မှနိုး၍တံခါးလာဖွင့် သည်။ “နင်ဘာလို့ကြာနေတာလဲ” “ရွာအတွက်လက်ဆောင်ဝယ်နေလို့” “အော ၊ဘယ်မှာလဲ” “ကားပေါ်ထားခဲ့တာ” “ငါလဲနင့်ကိုစောင့်ရင်းအိပ်ပျော်သွား တာ” “အင်းနင်လဲပင်ပန်းနေပြီပဲ” “အင်းလေ နုံး ချိနေတာဟ၊ပြီးတော့ နည်းနည်းအောင့်နေတာ” “အာဘွားထပ်ပေးရမလား” “တော်ပြီငါမခံနိုင်တော့ဘူး” “ဟားးဟားး” “ရယ်မ နေနဲ့၊ပြီးတော့ရွာလာရင် အေးဆေးနေ” “အေးပါဟာ” “ခနလောက်နားပါရစေဦး” “အေးနားနား” “ညနေလေးနာရီဆိုထွက်မယ်” “အင်းအခုနှစ်နာရီခွဲပဲရှိသေးတာ နင်လဲအိပ်ဦး” “ဆက်မလုပ်နဲ့တော့” “အေးပါဟာ” နှစ်ယောက်သားအိပ်ရာပေါ်လှဲပြီး အိပ်လိုက် ကြတယ်။ကျနော်လဲသူ့ ကိုဖက်ထားလိုက်ပြီးနောက်လုံချည် ထဲလက်နှိုက်၍ ပိပိကိုကိုင်လိုက်ရာ “မသာရေ ရတဲ့အချိန်မှာတောင် ကိုင်လိုက်သေးတယ်” “ကြိုက်တာကိုးဟ” “လုပ်မနေနဲ့ ငါနာနေပြီ” “အေးပါဟာ” နီလာလက်စဖြတ်ထားမှဖြစ်တော့ မည်။ယခု လိုဂျော့နဲ့လင်မယားလိုနေခဲ့တာကျေနပ်ပါသည်။ဂျော့ကိုငယ် သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်နဲ့ချစ်လည်း ချစ်သည်။ဂျော့ကိုချစ်ခြင်းသည် ပိုင်ဆိုင်လိုခြင်းမရှိပေ။ယခုလိုမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဟုနီလာမထင်မှတ်မိပေ။
သို့သော်ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ဂျော့အားပေးဆပ်လိုက်သော်လည်းနောင်တလည်းရမိမည်မဟုတ်ပေ။နောင် ရန်ကုန်ကိုလာလျှင်တော့ ဂျော့နှင့် တွေ့နိုင်သည်။ဂျော့ကိုဆက်၍လည်းချစ်နိုင်သည်လေ။ဂျော့ကိုထားခဲ့ လည်းသော်လည်းလွမ်းနေရမည်မဟုတ်ပေ။ညနေ လေးနာရီထိုးတော့ဟိုတယ်မှထွက်သည်။ကားဂိတ် ကိုရောက်ပြီးကားထွက်မှဂျော့ကို ပြန်ခိုင်းလိုက်သည်။ဂျော့ပြန်သွား တော့နီ လာ့ရင်ထဲဟာ၍ကျန်ခဲ့ရ သည်။တခုတော့နားလည်မိသည်။ ခွဲခွာခြင်းဆိုသည်မှာချန်ခဲ့သူလည်း လွမ်းရသလိုကျန်ခဲ့သူလည်းလွမ်း လို့ကျန်ခဲ့ပေမည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အတနျးဖျောသူငယျခငျြး